ညီမလေးပွီးမကွီးအလညျ့ – My Blog
တဈနာရီနီးပါးလောကျလိုးပွီး နှဈယောကျသား လရညျနှငျ့စောကျရညျမြား ပွိုငျတူပနျးထှကျကာ ကိစ်စပွီးလိုကျကွရသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့ ဒီတဈကွိမျတှငျလညျး နှဈခြီဆကျတိုကျပွီးလိုကျရခွငျးဖွဈ၍ အားတျောတျောပြော့သှားကာ ထူးကြျောရငျခှငျထဲ အသာဝငျရောကျကာမှိနျးနလေိုကျရလသေညျ။ “ထူးကြျောရယျ မမ ဘယျလိုတှေ ဖွဈကုနျသလဲဆိုတာ ပွနျစဉျးစားလို့တောငျမရဘူးကှယျ အပြျောကနအေပကျြဖွဈတယျဆိုတာ ဒါမြိုးပဲ ထငျပါတယျ ” သူမက နောငျတရသလို ပွောလိုကျမိသညျ။ ထူးကြျောက သူမပါးပွငျကလေး အသာအယာနမျးပွီး ခြော့မော့နရေလသေညျ။
ဒျေါနီနီမွငျ့ သူမအကွောငျးတှေ ထူးကြျောကို ပွနျလှနျပွောပွသညျ။ သူမအသကျ ၁၉ နှဈသမီးလောကျမှာ လငျနောကျလိုကျပွေးသညျ့အကွောငျးတှေ သမီးနှဈယောကျရှနေ့ောကျဆငျ့မှေးပွီး သမီးကွီး ၈ နှဈသမီးလောကျတှငျ ယောကျြားဖွဈသူ နိုငျငံခွားသင်ျဘောလိုကျရငျး အကျဆီးဒငျ့ဖွဈကာ ဆုံးပါးသှားပုံတှေ သူမတို့နှဈဖကျမိဘတှကေ လူခမျြးသာတှဖွေဈကွ၍ ဘဝကိုအပူအပငျမရှိဖွတျသနျးခဲ့ရပွီး ရနျကုနျမွို့တှငျ ကိုယျပိုငျတိုကျခနျးဝယျယူပွီး နထေိုငျခဲ့ကာ လငျသညျဖွဈသူသဆေုံးခြိနျကမြှ သမီးနှဈယောကျနှငျ့ ကသီလငျတဖွဈခဲ့ရ၍ နယျရှိမိဘတှပွေနျလညျပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ရကွောငျး။
တိုကျခနျးကိုလညျး ပွနျလညျရောငျးခပြွီး မိဘတှနှေငျ့အတူ ဒိုးတူပေါငျဖကျ လုပျကိုငျစားသောကျနလောခဲ့ကွောငျးမြား ပွောပွပါသညျ။သမီးတှအေရှယျရောကျ၍ သမီးကွီးသန်တာက အသကျ ၂၁ နှဈ အငယျမနီလာက ၁၈နှဈသမီး အရှယျလောကျမှာ အိမျထောငျအသီးသီးကကြာ တဈယောကျက မွိတျထားဝယျ အငယျမက တဈဖကျနိုငျငံမှာ သှားရောကျ အလုပျလုပျကိုငျနကွေကွောငျး ထူးကြျောအကွောငျးစုံသိလိုကျရသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့က ယခုအခြိနျမှာ မိဘတှလေညျးမရှိရှာတော့ဘဲ မောငျနှမသားခငျြးတှေ တကှဲတပွားဖွဈကာ စုဆောငျးထားသမြှ ပစ်စညျးဥစ်စာတှကေို တတိတိထိုငျစားရငျးက တဖွညျးဖွညျးနှငျ့လုံးပါးပါးကာ အထညျကွီးပကျြဘဝကို ရောကျရှိနလေပွေီ။
သမီးနှဈယောကျဆီက လစဉျပုံမှနျပေးပို့လာသော ငှကွေေးမြားကို ကဈြကဈြလဈြလဈြသုံးစှဲပွီး ဘဝကို ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနှငျ့ဖွတျသနျးနရေလသေညျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့တော့ သူမဘဝမှာ သမီးနှဈယောကျရဲ့အဝေးမှာနရေပွီး တဈယောကျတညျး အထီးကနျြဆနျလှသညျဟု ဆိုရခမြေညျ။ နှဈဦးစလုံး ကိုယျလိုတာကိုယျရကွပွီမို့ အတှေးကိုယျစီနှငျ့ငွိမျနကွေပွီးနောကျ ဒျေါနီနီမွငျ့က … “မောငျလေး မမတို့ တဈနလေုံ့း ဒီလိုနကွေဖို့ မသငျ့ဘူးထငျတယျ ပတျဝနျးကငျြကိုလညျးကွညျ့ရဦးမယျ မငျးဖကျက ဆန်ဒရှိတယျဆိုရငျ ညဖကျကမြှ မမအိမျနောကျကနေ ပတျပွီးလာခဲ့လိုကျပါ မမအိမျတံခါး ဖှငျ့ပေးထားမယျ ” “ကောငျးပါပွီ မမ မမလညျး ကြှနျတေျာ့ကွောငျ့ မောလှရောပေါ့ ကြှနျတျောတော့ ဒီလို မမြှျောလငျ့ဘဲ မမနဲ့ အဆုံးစှနျထိ ခဈြခှငျ့ရတာကို ကနြေပျမဆုံးပါဘူး ” ။
“အပွောမကွီးနဲ့ ငါ့မောငျရယျ မငျးအသကျ အငယျလေးရှိပါသေးတယျ နောကျတော့မှသာ မမနဲ့ပတျသကျခဲ့ရတာကို မငျး နောငျတရခငျြရနလေိမျ့မယျ ” ဒျေါနီနီမွငျ့က ခပျညညျးညညျးကလေးပွောလိုကျရာ သူမပုံစံကလေးကိုကွညျ့ပွီး ထူးကြျောလညျးစိတျမထိနျးနိုငျတော့ဘဲ … “မမ … ” ဆိုပွီး … “ကြှနျတျောမပွနျခငျ တဈခါဖွဈဖွဈခဈြလိုကျခငျြသေးတယျ မမရယျ ခှငျ့ပွုနိုငျမလား ဟငျ ” “အို မငျး မကနြေပျသေးဘူးလားကှယျ ဒီလောကျအထိတောငျ လူကိုဖှတျဖှတျညကျညကျကွအေောငျ ဆျောခငျြသလို ဆျောပွီးပွီပဲ ဥစ်စာ ဟငျး ဟငျး ”
“မရဘူး မမနဲ့နရေတာ အားရတယျ လို့ မရှိဘူး မမရဲ့ ခဈြလိုကျတာ မမရယျ ” ထူးကြျော ပွောလညျးပွော နမျးလညျးနမျးလိုကျရာ ဒျေါနီနီမွငျ့ ပြော့ကသြှားရှာပါသညျ။ သူမကိုယျလုံးအိအိကွီးကို ပှခြေီ့ပွီး ထူးကြျော အခနျးထဲမှာ နရောခလြိုကျသညျ။ သူမကပကျလကျ သူက အပျေါစီးက မှောကျရကျသား နရောယူလိုကျခွငျးပဲဖွဈသညျ။ နှဈယောကျစလုံး လှကွေီးထိုးကွိုကျနှဈသကျသူခညျြးမို့ ထငျထားတာထကျ အပေးအယူမြှနခေဲ့ကွပသေညျ။ ထူးကြျော သူ့လီးကို နှဲ့ကာနှဲ့ကာဖွငျ့ တဈခကျြခငျြးပငျ ဖိလှိမျ့ကွိတျ၍ လိုးပေးနသေညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့လညျး အောကျကနေ သူမဖငျကွီးနှဈဖကျကို မွောကျကာကွှကာဖွငျ့ ပငျ့မွှောကျခံဆောငျကာ ညှောငျ့ပေးနလေသေညျ။
လီးဝငျလီးထှကျ တဖွညျးဖွညျး ခြောမှလေ့ာပွီဖွဈ၍ တဈကွိမျထကျတဈကွိမျ ပိုမိုပွီး ကာမစညျးစိမျ တှလေ့ာခဲ့ကွကာ လူခငျြးမခှာနိုငျအောငျဘဲ ဖွဈနရေလသေညျ။ တဈခြီထပျလိုးမညျဟု မှနျးထားသျောလညျး နောကျထပျ သုံးခြီတိုငျတိုငျ လိုးဖွဈသှားသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့ စောကျပတျတှေ ပူထူကြိနျးစပျပွီး ထူးကြျောလညျး လရညျခမျးမတတျပငျ ဖွဈသှားရလသေညျ။ “ထူးကြျော ခုလောလောဆယျ မပွနျပါနဲ့ဦး မောငျလေးရာ မထူးပါဘူး မမတဈကိုယျလုံးကိုလညျးယူ မမပေးတဲ့ပိုကျဆံကိုလညျး အမှတျတရအနနေဲ့ မငျးယူထားရမယျနျော ကွားလား မောငျလေး … ဒီနေ့ မငျးအလုပျမဆငျးခငျြလညျး မဆငျးနဲ့တော့ မမတဈယောကျလုံး မငျးနဘေးမှာရှိပါတယျ ငှရေေးကွေးရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး မငျးလိုအပျတဲ့အကူအညီမှနျသမြှ မမ ပေးမယျ မမဘဝကို မငျးလကျထဲမှာပဲ ပုံအပျလိုကျခငျြပွီကှယျ ” “မမသဘောအတိုငျးပါ မမ ” ထူးကြျော ပွောလိုကျရငျး … “နောကျတဈနာရီလောကျ နပွေီးမှ ပွနျမှာပါ ကြှနျတျော ဒီည ဆကျဆကျလာခဲ့မယျ မမဖကျက စောငျ့နမှောသခြောပါတယျနျော ” “စောငျ့မှာပါ မောငျလေး မမ ကတိပေးပွီးသားပါပဲ ” မောမောနှငျ့ အတူလဲလြှောငျးအိပျစကျ၍ စကားတှတျထိုးပွောဆိုနကွေရငျး အခြိနျကုနျမှနျးမသိ ကုနျသှားသညျ။
ထူးကြျောလညျး သူ့မမဒျေါနီနီမွငျ့ကို နှုတျဆကျပွီး လမျးပျေါပွနျထှကျလာခဲ့လသေညျ။ တဈနကေုနျ ဟိုငျးဝေးခရီးနှငျပွီး ခါတိုငျးထကျလညျး နတှေ့ကျပိုကိုကျကာ ဒျေါနီနီမွငျ့ မတ်ေတာဖွငျ့ပေးအပျခဲ့သော ငှကွေေးမြားကလညျး ရှိနပွေနျသဖွငျ့ ထူးကြျော အိမျကိုမပွနျတော့ဘဲ အမကေို့ ခရီးဝေးသှားဖို့ရှိသေးကွောငျး လူကွုံနှငျ့ သတငျးစကားပါးလိုကျပွီး စားသောကျဆိုငျတဈဆိုငျဝငျ၍ အရကျနှငျ့မွညျးစရာမြား မှာယူကာ စားသောကျ အခြိနျဖွုနျးလိုကျလသေညျ။
ည ၉ နာရီလောကျကမြှ ဆိုငျက ပွနျထှကျလာသညျ။ လူကလညျး ရခြေိနျကိုကျနပွေီမို့ ဒီအခြိနျလောကျဆို အခြိနျကောငျးပငျ ဖွဈရော့မညျဟု တှေးပွီး တဈယောကျတညျး စိတျလှုပျရှားနမေိပသေညျ။ လမျးထိပျရှိ ဆေးဆိုငျတဈဆိုငျမှာ သူအမွဲသုံးစှဲနကြေ ကာမနှငျ့ပတျသကျသညျ့ဆေးတဈမြိုးကို ဝယျယူလိုကျပွီး ဒျေါနီနီမွငျ့အိမျရှိရာဖကျကို လှညျ့ဝငျလာခဲ့လိုကျ ပါသညျ။ အိမျနောကျဖေးဖကျကလာပါ ဟု ကွိုပွောထားသညျ့အတိုငျး ထူးကြျော ဆိုငျကယျစကျအရှိနျကိုလြှော့ကာ slow လေး မောငျးနှငျလာခဲ့သညျ။အိမျနှငျ့ကပျရကျ တံစကျမွိတျအောကျမှာဆိုငျကယျ ဇကျသော့ခတျကာ ပဈထားလိုကျပွီး နောကျဖေးတံခါးကို အသာတှနျးကွညျ့လိုကျသညျ။ တံခါးကို lock ခထြားခွငျးမရှိဘဲ စရေုံ့သာစထေ့ားသညျ။
ဒျေါနီနီမွငျ့တဈယောကျ သူ့အလာကိုမစောငျ့နိုငျဘဲ အိပျမြားအိပျနပွေီလားတော့ မသိပါ။ အိမျထဲကို အသာခွဖှေဝငျလာပွီး အိမျအတှငျးခနျးဖငျဆီ ခြောငျးကွညျ့လိုကျတော့ ကုတငျပျေါမှာ ပါးလှာလှနျးသညျ့ ညဝတျစုံပြော့ကလေးဝတျကာ ပကျလကျကားယားလဲလြှောငျး၍ နသေော ဒျေါနီနီမွငျ့အား အခနျးထဲမှာ တဈယောကျတညျးရှိနသေညျကို တှမွေ့ငျလိုကျရလသေညျ။ “ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ ” “မမ မမ ကြှနျတျောပါ ” “လာပွီ …” ဆိုသောအသံနှငျ့အတူ ဒျေါနီနီမွငျ့ တံခါးလာဖှငျ့ပေးသညျ။ အိပျခငျြမူးတူးဖွဈနဟေနျရှိပမေယျ့ သူလာတာတှရေ့၍ ရှငျရှငျမွူးမွူးကလေးဖွဈသှားဟနျတူပါသညျ။
ကိုယျပျေါကအကြ င်္ီပါးကလေးကို ဆှဲဆနျ့လိုကျပွီး သူ့ဆီလကျနှဈဖကျကမျးပေးလိုကျရာ ထူးကြျောလညျး သူမကိုယျလုံးအိအိထှေးထှေးလေးကို တငျးတငျးကွပျကွပျပငျ ပှဖေ့ကျထားလိုကျပါသညျ။ “ဟငျး သောကျထားလိုကျတာ နံစျောနတောပဲ ” “ရဲဆေးတငျထားတာလေ မတျောတဆ ပွေးသငျ့ပွေးရတာပေါ့ ” “မငျးကို ဘယျသူကပွေးခိုငျး မှာလဲ လို့ ဒီကဖွငျ့ ညဥျ့ဦးပိုငျးကတညျးက လညျတဆနျ့ဆနျ့နဲ့ မြှျောလိုကျရတာ ” “နညျးနညျး ထပျသောကျလိုကျခငျြသေးတယျ မမရော သောကျခငျြလား ပွော” ထူးကြျောက သူဆိုငျကနေ အသငျ့ယူလာသော အရကျပုလငျးကို ပွလိုကျရာ ဒျေါနီနီမွငျ့က ခေါငျးညိတျလိုကျပွီး … “မောငျလေး သောကျခငျြသောကျလေ မမက နညျးနညျးပါးပါးပေါ့ လာ အိမျရှသှေ့ားရအောငျ မမ စားစရာ အမွညျးစီစဉျပေးမယျ ”။
ဒျေါနီနီမွငျ့ပွောလိုကျပွီး ထူးကြျောလကျထဲက ပုလငျးကိုပါ ယူ၍ အခနျးပွငျကိုထှကျလာလိုကျသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့အနောကျကနေ ထူးကြျောလိုကျပါလာခဲ့သညျ။ သူ့မကျြလုံးမြားက ပါးလှာသော ညဝတျအကြ င်္ီအောကျမှ နိမျ့တုနျမွငျ့တုနျ လှုပျခါယမျးသှားသော ဒျေါနှီနီမွငျ့၏ ကွီးမားထညျဝါ စှငျ့ကားလှသော ဖငျသားအိအိကွီးမြားကို အရသာယူကာ ကွညျ့ငေးရငျးဖွငျ့ သူ့ပေါငျခှကွားမှ လီးငပဲကွီးက အိပျပြျောရာကနေ ခေါငျးထောငျနိုးထကာ လီးတောငျခငျြခငျြဖွဈလာရပသေညျ။ သူမက အိမျနောကျခနျးကိုဝငျပွီး ညနကေတညျးက ထူးကြျောလာလြှငျ အတူတကှ စားသောကျရနျအတှကျ ဆိုငျကနေ အသငျ့မှယူထားသော အစိမျးကွျော ငါးရှဥျ့ခြိုခဉျြနှငျ့ ဝကျသားကုနျးဘောငျကွီးကွျော စသညျ့ အမွညျးမြားနှငျ့အတူ အရကျထညျ့ရနျ ငါးကွငျးဖနျခှကျနှဈခှကျ ရသေနျ့ဘူးတို့ကိုပါ တဈပါတညျး ထုတျယူလာခဲ့လသေညျ။ “မမ တကယျကို အလိုကျသိတာပဲကှာ ကြှနျတျောတော့ မမကိုတောငျ အားနာလာပွီ ” “ကဲ သောကျစရာရှိတာသောကျပါ မောငျလေး အားနာတယျ ဘာတယျလုပျမနနေဲ့ …တဈနခေ့ငျးလုံးလညျး လူကို အားမနာစတမျး လိုးပွီးပွီပဲ ဘာ ခုကမြှ … လူကိုမြား အားနာသလေး နဲ့ … ဟှငျး ” သူမ၏မကျြစောငျးပဈထိုးခွငျးကို ထူးကြျော ဇကျကလေးပု၍ ငွိမျခံလိုကျရသညျ။
“ကဲ မငျးပဲ စိတျကွိုကျထညျ့ပတေော့ မမက သိပျတော့မလုပျတတျဘူး ယောကျြားတှကေ ဒါမြိုးသောကျမှ အားရှိတယျလို့ မမကွားဖူးပါတယျ …ဒီတော့ မငျး အားရှိအောငျလို့ … ဟငျး ဟငျးဟငျး ” “ဒါဖွငျ့ ညတိုငျး သောကျမယျနျော မမ … ဟဲ ဟဲ ” “သဘော သဘော ကိုယျတေျာ့သဘောပါ …တျော ရေ့ တျောသောကျမယျဆိုရငျလညျး ကြုပျက အမွညျးပနျးကနျ အဆငျသငျ့ ပွငျထားပေးရမှာပေါ့ အဟငျး ဟငျး ဟငျး ” ဒျေါနီနီမွငျ့က ထူးကြျောကို ခပျငေါ့ငေါ့ကလေးပွောလိုကျပွီး သူထညျ့ပေးသော အရကျခှကျကိုယူ၍ နှဈယောကျသား ခြီးယား …လုပျကာ ဒျေါနီနီမွငျ့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးမွုံ့၍ သောကျလိုကျသညျ။ အမှနျတော့ သမီးနှဈယောကျမှေးပွီးသား မိခငျတဈယောကျအနနှေငျ့ မီးတှငျးမှာကတညျးက သူအရကျသောကျဖူးခဲ့ပါသညျ။ လငျဖွဈသူသညျလညျး သင်ျဘောသားအရကျသမားပဲဖွဈ၍ နှဈယောကျအတူ ဝိုငျးဖှဲ့သောကျကွတာမြိုးလညျး ရှိသညျပငျ။ ယခုကမြှ ရူးခငျြယောငျဆောငျခွငျး ဖွဈသညျ။ ထူးကြျောလညျး ဇကမသေးသူမို့ အရငျတဈခှကျပွီးတဈခှကျသောကျရငျး စကားလညျးပွော အမွညျးလညျးစားနှငျ့ နီနီမွငျ့ကို သူ့ပေါငျပျေါမှာ အထိုငျခိုငျး၍ သူမတဈကိုယျလုံးကို ဟိုကိုငျဒီနယျပွုကာ နလေသေညျ။ အရကျရှိနျတကျလာသလို အာလေးလြှာလေးဖွဈလာသညျ။
ထူးကြျောက သှေးအားကောငျး၍ ကာမရာဂလုပျဆောငျမှုကို အားပေးသော ငရှဥျ့ကွျောကို အားပါးတရစားလိုကျပွီး ဒျေါနီနီမွငျ့နှုတျခမျးမြားကို သူ့နှုတျခမျးဖွငျ့ ဖိကပျနမျးစုပျ၍ နို့အုံအိအိနှဈလုံးကို ဖဈြကိုငျဆုပျနယျပေးနသေညျ။ ညဝတျအကြ င်္ီမလုံမလဲ ဖွဈနသေော ဒျေါနီနီမွငျ့၏ ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးတဈခုလုံးမှာ ဗလာဟငျးလငျးဖွဈလြှကျရှိလပွေီ။ သူမ၏ထှားထှားအိအိ တငျးရငျးမို့ကွှနသေော ရငျသားအစိုငျအခဲကွီးနှဈမွှာက ထူးကြျော၏ ခပျကွမျးကွမျးခပျရမျးရမျး ကိုငျတှယျဖဈြညှဈမှုအောကျမှာ စိစိညကျညကျပငျ ကွမှေတော့မတတျဖွဈကာ နရေတော့သညျ။
နို့ကို တဈလှညျ့စီခနြေယျပေးနရေငျးက ထူးကြျော သူမပေါငျခှဆုံရှိစောကျပတျကို လာရောကျနှိုကျကိုငျလိုကျပွနျသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့လညျး တအိအိတအငျ့အငျ့ညညျးတှားရငျး သူမပေါငျနှဈဖကျကို ခပျပွဲပွဲကလေးလုပျကာ ထောငျကားပေးလိုကျရာ ပေါငျလယျမရောကျတရောကျခနျ့ ရှိသညျ့ ညဥျ့ဝတျရုံကလေးမှာ သူမခါးအထကျဆီသို့ ရောကျအောငျ လြှောကသြှားရတော့သညျ။ သူမ၏အမှေးအမွငျနကျမှောငျထူထပျလှသညျ့စောကျပတျဖောငျးအိအိကွီးက ထူးကြျောမွငျကှငျးထဲမှာ အဖုံးအကှယျမဲ့စှာဖွငျ့ ဘှားကနဲ ပျေါထှကျလာရပသေညျ။ “မထူးပါဘူး မမ ခြှတျပေးပါ့မယျ မောငျလေးရယျ ” နီနီမွငျ့ သူမ ညဝတျ လေးကို ကိုယျပျေါကနေ လြှောခြှတျခပြဈလိုကျပါသညျ။
လူလညျး မူးရိပျရိပျကလေး ဖွဈကာနပွေီး ရမ်မကျမကွှကွှအောငျ အပွတျနှူးဆှခံထားရ၍ သူမစိတျလှတျကိုယျလှတျ ဖွဈခငျြလာမိသညျ။ ဝတျလဈစားလဈကိုယျလုံးလေးကို လှညျ့ပတျပွပွီး ထူးကြျော အရှမှေ့ာ သူမဒူးထောကျ၍ ထိုငျလိုကျရငျး သူ့ပုဆိုးအောကျကလီးကွီးကို စတငျစုပျယကျပေးလိုကျပါသညျ။ ထူးကြျောလဒဈကွီးမှာ သူမအာငှရေ့သညျနှငျ့ တဈပွိုငျနကျတညျး လယောဉျပဈဒုံးကညျြတဈစငျး မိုးပျေါကိုမွှောကျထောငျထားသလို မားမားမတျမတျကွီး တောငျမတျထကွှလို့ လာခဲ့ရပွီဖွဈသညျ။ “အား သိပျကောငျးတယျ မမရယျ မမလီးစုပျတာတျောလိုကျတာနျော ကြှနျတေျာ့ လီးတဈခြောငျးလုံးကို စုပျလိုကျတာမြား …
လကျဖြားတောငျခါတယျ သိလား …ဟငျး ဟငျး … ဟငျး ” “အဲဒါ မငျးလေးကို ခဈြလို့ပေါ့ မောငျလေးရဲ့ မမ ဒီညတော့ မငျးလီးကွီးကို ဝအောငျစုပျပေးမယျ ပွီးရငျ နလေ့ညျကလို လိုးကွရအောငျ နျော မောငျလေး ” နီနီမွငျ့က အားတကျသရော ပွောဆိုလိုကျသညျ။ သူမမကျြနှာကလေးနီမွနျးနပွေီး အသံကလညျး စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ တုနျယငျနသေလိုထငျရလသေညျ။ နီနီမွငျ့ ထူးကြျောလီးကို ကုနျးစုပျကာ လီးဒဈထိပျကနေ လီးအရငျးထိ ရှသှေ့ားနောကျပွနျ ဂှငျးတိုကျဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ လီးကွီးက အကွောအမွှောငျးမွှောငျးထပွီး တောငျမတျတုနျခါနလြှေကျရှိလပွေီ။
ဒီအတိုငျးဆကျလုပျလြှငျ လရညျထှကျကုနျမှာစိုး၍ ထူးကြျောက … “မမ ဟိုဖကျလှညျ့ပွီး ဖငျကုနျးလိုကျ ” ဆိုကာ သူမကိုဖငျကုနျးခိုငျးရငျး ဖငျသားကွီးနှဈဖကျအနောကျကနေ စောကျပတျဟပွဲပွဲကလေးအား ကုနျးမှုတျပဈလိုကျပါသညျ။ နီနီမွငျ့စောကျပတျမှာလညျး အရညျတှရှေဲသထကျရှဲလာနပွေီဖွဈသညျ။ ထူးကြျော၏ ဘာဂြာအစုပျအမှုတျကလညျး ပကျစကျလှနျးလှသညျ။ သူမစောကျပတျကို ယကျလိုကျစုပျလိုကျ လကျခြောငျးမြားဖွငျ့ ထိုးနှိုကျဆှ၍ ဖငျပေါကျကိုပါ မကနျြအောငျ လြှာပွားကွီးနှငျ့ယကျယကျပေးလိုကျရာ နီနီမွငျ့ ထှနျ့ထှနျ့လူးနရေတော့သညျ။
စောကျပတျတဝိုကျက အရညျတှလေညျး တောကျတောကျယိုကာ စီးကလြာရပွီး ကွမျးပွငျထကျမှာ အကှကျလိုကျကွီးဖွဈလို့သှားရတော့သညျ။ နှဈယောကျသား သောကျလကျစ အရကျခှကျတနျးလနျးနှငျ့ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ဖွဈခငျြတိုငျးဖွဈနခေဲ့ကွခွငျး ဖွဈသညျ။ နီနီမွငျ့ကား ရာဂအရှိနျအတကျကွီးတကျပွီး ထနျခငျြတိုငျးထနျနလေပွေီ။ “မောငျ မောငျလေး တျော ပွီထငျတယျ လိုးတော့ လိုးပါတော့နျော … မမ မရတော့ဘူးကှယျ ” “ဖငျကုနျး လိုးမှာနျော မမ ” “မငျး ကွိုကျရငျ ပွီးတာပဲ ငါ့မောငျရယျ ဖငျတော့မလိုးလိုကျနဲ့ဦးနျော ” “မမ သဘောမကရြငျ မလုပျပါဘူး “. ထူးကြျောပွောပွီး သူမစောကျပတျထဲကို လဒဈထိပျခေါငျးအား ဖိနှိမျ၍ သှငျးကာ ဆောငျ့လိုးခလြိုကျပါသညျ။
“အိအငျ့အငျ့ ဖွေးဖွေးလုပျပါ ငါ့မောငျရယျ မမဘယျမှ ထှကျမပွေးပါဘူး ” “အခြိနျမရှိဘူးမမရဲ့ မမကို တဈညလုံး ဝအောငျလိုးရဦးမှာ ” “ဟငျ့ ကဲလိုကျတာနျော သူတို့ယောကျြားတှမြေား ဒီအတိုငျးခညျြးပဲ ” ထူးကြျောလညျး ဘာမြှပွနျပွောမနတေော့ဘဲ လီးကွီးအရငျးထိသှငျးကာ အဆကျမပွတျဇယျဆကျသလို ဆောငျ့လိုးပဈလိုကျလသေညျ။ နီနီမွငျ့ ဖငျသားအိအိနှဈဖကျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ အားပါးတရဆုပျဆှဲ၍ လိုးပေးလိုကျခွငျးကွောငျ့ နီနီမွငျ့ဖငျသားကွီးနှဈဖကျက တုနျကနဲတုနျကနဲဖွဈလို့သှားရသညျ။ ထူးကြျောလညျး ထနျနပွေီဖွဈ၍ သူ့မမကို နညျးနညျးကလေးမှသကျညှာခွငျးမရှိတော့ဘဲ တဖွောငျးဖွောငျးနှငျ့ မီးကုနျယမျးကုနျ ကွဲပဈလိုကျလတေော့သညျ။
သူ့လီးကွီးက နီနီမွငျ့ဖငျသားနှဈဖကျအကွားကနေ သူမစောကျခေါငျးလေးထဲကို အဆုံးအထိ တဗှပျဗှပျတဇှပျဇှပျနှငျ့ ထိုးဖောကျဝငျသှားပရော သားအိမျအထိပငျရောကျရှိသှားပွီး သူမရငျခေါငျးထဲမှာ စူးကနဲအောငျ့ကနဲ ဖွဈဖွဈသှားရပသေညျ။ နီနီမွငျ့လညျး ထိခကျြပွငျးလှနျးလှသဖွငျ့ မကျြနှာကလေး ရှုံ့လိုကျမဲ့လိုကျနှငျ့ တအိအိညညျးတှားရငျး ကာမအဆိပျ တကျပွီးရငျးတကျလာရလသေညျ။ “မောငျလေး တအားမဆောငျ့နဲ့ကှာ မငျးလိုးတာ ကွမျးလှနျးတယျ မမသခေငျြစျောနံလာပွီ ” “လိုးလို့ သတော မကွားဖူးပါဘူး မမရဲ့ မမ ကြှနျတေျာ့လီးကို မကွိုကျဘူးလား ”။
“အိုး ကွိုကျလို့ ခံတာပေါ့မောငျလေးရယျ ဖွေးဖွေးခငျြးပဲ လိုးဖို့ ပွောတာပါ မငျးလညျးမော မမလညျး ခံရတာမသကျသာလှဘူးကှယျ့ ” “ရတယျ မမ အကွိုကျ ဖွဈစရေမယျ ” ထူးကြျော မိနဈနှဈဆယျလောကျကွာအောငျလိုးရငျး နီနီမွငျ့လညျး စောကျပတျတဈခုလုံး ထူပူလာသညျ့အလြှောကျ ခဏနားခိုငျးလိုကျရပွီး ပုံစံတဈမြိုးပွောငျးလိုကျကွကာ ပကျလကျဒူးထောငျပေါငျကား အနအေထားအတိုငျး သူကအပျေါစီးကနေ နီနီမွငျ့စောကျပတျထဲကို လီးသှငျး၍ ဆကျလကျလိုးကွပွနျသညျ။ ထူးကြျောက သူမဖငျကိုအောကျကနေ ပငျ့မကိုငျကာ သူ့ခါးအားကိုသုံးပွီးလိုးနမေို့ အရသာလညျး တကယျရှိလှနျးလှပသေညျ။
“ကောငျးလား ဟငျ မမ ” “ကောငျးတယျ မောငျရယျ မမစောကျပတျကှဲပွဲသှားအောငျ လိုးလိုကျစမျးပါကှယျ အ အား အငျ့အငျ့ ဆောငျ့ဆောငျ့ အိ အငျ့ …ကြှတျ ကြှတျ ” “စှတျဖှတျ ဖှပျ စှိ စှပျ ဖှတျ ဗလှတျ ဖှပျ ဗှပျ ဘုတျ ဗလပျ ဘှပျ ” အသံတှမွေိုငျဆိုငျလို့သှားသညျ။ နောကျထပျ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျအကွာမှာ ထူးကြျောလညျး အားသှနျလိုးရငျး သူ့လီးကွီးထိပျမှ လရညျမြားကို နီနီမွငျ့စောကျပတျထဲသို့ ပနျးညှဈထုတျပဈလိုကျပါသညျ။ နီနီမွငျ့လညျး အသညျးခိုကျအောငျ အကောငျးကွီးကောငျးသှားရပွီး စောကျရညျမြားကို ထူးကြျောနှငျ့တဈပွိုငျတညျး ပနျးလှတျ လိုကျရပသေညျ။
နှဈယောကျသား ငွိမျကသြှားကွကာ ကွမျးပွငျထကျမှာ မောမောနှငျ့ ခတ်ေတနားနေ လိုကျကွသညျ။ ဒုတိယအခြီပွနျမစခငျ အရကျသောကျလိုကျ စားစရာအမွညျးတှကေုနျအောငျစားလိုကျကွကာ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ ပှလေို့ကျဖကျလိုကျနှငျ့ ကလူကြီစယျ ပွောဆိုနကွေပသေညျ။ အခြိနျက ည ၁၀ နာရီ ၁၁ နာရီ ဝနျးကငျြလောကျပဲ ရှိပဦေးမညျ။ အရကျတဈပုလငျးလုံးကုနျအောငျ အပွတျရှငျးလိုကျပွီးမှ ထူးကြျောက … “မမ အခနျးထဲ သှားကွမလား ” “နဦေး မောငျလေး မမမောငျလေးရငျခှငျထဲမှာပဲ အကွာကွီး လှဲနခေငျြသေးတယျ မမ ဗှီဒီယိုအခှတှေေ စုထားတာရှိတယျ မငျးနဲ့အတူ ကွညျ့ခငျြလို့ ” “ကောငျးသားပဲ မမရဲ့ အပွာကားဆို ကွညျ့ခငျြတယျ ” ဒျေါနီနီမွငျ့လညျး လှဲနရောက အသာထပွီး တီဗှီစငျရှိရာသို့သှားကာ သူမသိမျးဆညျးထားသညျ့ခှမြေားထဲမှ ကောငျးနိုးရာရာ အောခှသေုံးလေးခှကေို ရှေးထုတျယူလိုကျသညျ။ အောကျစကျထဲကို အခှတေဈခှထေိုးထညျ့လိုကျကာ နှဈယောကျသားအတူ ထိုငျကွညျ့ကွသညျ။ အမရေိကနျအောကားပဲဖွဈသညျ။ သူမက တဏှာကွီးသူပီပီ အခှကွေညျ့မညျဆိုလြှငျလညျး အမရေိကနျအောကားမှ ကွိုကျသူဖွဈမှနျး ထူးကြျောသိခှငျ့ရလိုကျပါသညျ။ မငျးသမီး မငျးသားက တဈလကျတညျး ဝမျးဘိုငျဝမျးဆှဲခွငျးမဟုတျဘဲ အတှဲအခငျြးခငျြး နှဈပငျလိမျ သုံးပငျလိမျ လိုးကွတာကို ပီပီပွငျပွငျရိုကျကူးထားခွငျးဖွဈသညျ။
နီနီမွငျ့က တဈယောကျတညျးနခြေိနျမှာ ဤနညျးနှငျ့ပငျ သူမစိတျကို အပနျးဖွကော သာယာမှုရှာခွငျးဖွဈကွောငျး ထူးကြျောကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပငျ ဖှငျ့ဟပွောပွနပေါသညျ။ “မမက အုပျစုနဲ့ လိုးတာကို ကွိုကျလို့လား ” “အဟငျး ဟငျး ဒါက လကျတှလေု့ပျရတာမြိုးမှ မဟုတျတာ စိတျကူးနဲ့ရူးကွတာပဲလေ လိနျ ကိစ်စဆိုတာမြိုးက သဘာဝတရားနဲ့ ဆနျ့ကငျြလလေေ ဖီလငျ ပိုရလလေပေဲ မဟုတျလား ငါ့မောငျရယျ ” “အငျး မမပွောတာလညျး မှနျသားပဲ ကြှနျတျောလညျး အခှငျ့ကွုံရငျ နှဈယောကျသုံးယောကျတော့ လိုးခငျြသားပဲ မမကရော ”
“မမလညျး မောငျလေးလိုပဲပေါ့ကှယျ လူတိုငျးဟာ အသှေးနဲ့အသားနဲ့ တညျဆောကျထားကွတာပဲ မဟုတျလားလို့ …ဒါပမေယျ့ မဖွဈသငျ့လို့သာ ဆန်ဒကို ဦးနှောကျနဲ့ အသိဉာဏျနဲ့ ထိနျးပွီးနကွေရတာပေါ့ ” “ကြှနျတျော မမကို ပိုခဈြ ပိုလေးစားသှားပွီ မမရယျ ” “မမလညျး မောငျလေးကို ခဈြတယျ မောငျလေးလိုခငျြရငျ မမ ဘာမဆိုပေးခငျြတယျ ” “ကြှနျတျောက မမဖငျကို လုပျခငျြတယျဆိုရငျရော …” “လုပျလေ မမကို စောကျပတျနဲ့ ဖငျ မောငျလေး လိုးခငျြတာလိုးပါ ဒီတဈညတညျးမဟုတျဘူးနျော နောကျရကျတှလေညျး ဒီအတိုငျးပဲ မငျးစိတျသနျသလို လုပျ စိတျရှိလိုးနိုငျတယျ မမ ဒါ အပိုပွောနတော မဟုတျဘူး နျော မောငျလေး ” ဒျေါနီနီမွငျ့တဈယောကျ ရှငျးရှငျးဘှငျးဘှငျးပငျ ပွောခလြိုကျပါသညျ။
ဆကျလကျ၍လညျး အကယျ၍မြား ထူးကြျောအနနှေငျ့နှဈယောကျလိုးခငျြလြှငျ ကွိုကျရာ စျောတဈပှကေို သူမအိမျသို့ ချေါလာနိုငျကွောငျးနှငျ့ အဆိုပါမိနျးမကသာ သဘောတူခှငျ့ပွုမညျဆိုပါက မိမိဖကျကလညျး ဘာကိုမဆို လုပျပေးနိုငျမှာဖွဈကွောငျး မြားကို ထူးကြျောအား ပှငျ့လငျးစှာပငျ ပွောဆိုလိုကျပွနျပါသညျ။ သူမဟာ သဝနျတိုတတျသူမဟုတျကွောငျးနှငျ့ အခဈြနှငျ့ရမ်မကျကို ခှဲခွားသိမွငျနိုငျစှမျးရှိသညျ့ အသကျအရှယျကိုရောကျနပွေီဖွဈကွောငျးကိုလညျး ထူးကြျောကို ထပျလောငျးရှငျးပွနပွေနျပါသညျ။ ဗှီဒီယိုအပွာခှထေဲက ဇာတျဝငျခနျးတှကွေညျ့ရငျး မောငျလေးနှငျ့မမ ဆကျပွီး အလုပျဖွဈကွသညျ။
အခှထေဲမှာတော့ အရှတေို့ငျးအနှယျဖွဈသော မငျးသမီးနုနုထှတျထှတျကလေးကို ကပ်ပလီလူမညျး အမြိုးသားကွီးနှဈယောကျက အရှပေ့ေါကျအနောကျပေါကျ အကုနျဖှငျ့ပွီး ပကျစကျစှာပငျ စခနျးသှား နကွေပသေညျ။ ထူးကြျောလညျး အားကမြခံ အနောကျပေါကျဖှငျ့ခငျြလာ၍ နီနီမွငျ့ကိုပွောလိုကျရာ သူမကခှငျ့ပွုတာနှငျ့ ထူးကြျောလညျး သူမဖငျထဲ လီးထညျ့ပွီး အပီအပွငျကြုံးလိုးပဈလိုကျလသေညျ။ ဖငျလိုးရငျးကလညျး သူမစောကျပတျကို လကျထညျ့နှိုကျဆှ၍ အဆကျမပွတျအသှငျးအထုတျလုပျပေးလိုကျရာ သူမစောကျခေါငျးလေးထဲမှ စောကျရညျတှေ တဒီးဒီးစီးကလြာပွီး ဖငျနှငျ့စောကျပတျ တဈပွိုငျတညျး အဆျောခံရသလို ဖွဈနေ၍ နီနီမွငျ့လညျး အကောငျးပျေါအကောငျးဆငျ့ကာ သုံးလေးခြီလောကျ ဆကျတိုကျပွီးသှားရတော့၏။
ဖငျတဈခြီလိုးပွီး စောကျပတျကိုတဈခြီ ထပျလိုးပေးလိုကျသညျ။ နီနီမွငျ့ကို မှောကျခုံရကျဖငျကုနျးခိုငျးပွီး ခှေးကုနျးလိုးခွငျးဖွဈသညျ။ နာရီဝကျလောကျလိုးပွီး နီနီမွငျ့က ညောငျးသညျဟုဆိုသဖွငျ့ ပကျလကျပုံစံပွောငျးကာ ထူးကြျောက အပျေါစီးကနတေကျခှပွီး လိုးပေးသညျ။ နီနီမွငျ့လညျး သူ့ဆောငျ့ခကျြအတိုငျးလိုကျပွီး အောကျကနေ သူမဖငျသားအိအိကွီးနှဈဖကျကို မွောကျကာကွှကာဖွငျ့ ပငျ့ညှောငျ့လိုးပေးနသေညျ။ မိနဈနှဈဆယျလောကျကွာတော့မှ နှဈယောကျသား စောကျရညျနှငျ့လရညျမြား ပွိုငျတူပနျးထှကျပွီး တဈခြီပွီးသှားကွလသေညျ။
တဈညလုံး အောကားတဈကားပွီးတဈကားကွညျ့သလို နှဈယောကျသား ဘယျနှဈခြီဘယျနှဈလားမသိအောငျ အပွတျအသတျပငျ လိုးကွဆျောကွသညျ။ အိပျယာဝငျခြိနျကပငျ မနကျ ၅ နာရီခှဲလောကျရှိနပွေီ။ နှဈယောကျစလုံး အရကျကမူး အားအငျကုနျခမျးနှမျးလပြွီး တဈယောကျကိုတဈယောကျဖကျတှယျ၍ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျမောကသြှားကွလေ၏။ နောကျနှဈရကျအကွာ ဒျေါနီနီမွငျ့ ဘီလငျးတောငျစှနျးဖကျအသှားတှငျ ထူးကြျောကိုသာ ဆိုငျကယျနှငျ့ပို့ခိုငျးပွီး သမီငယျဖွဈသူ၏ ယောကျြားဖကျက အမြိုးအိမျမှာ တဈညအိပျနထေိုငျခဲ့သညျ။ နီနီမွငျ့က ထူးကြျောကို သူမ၏မောငျဝမျးကှဲဟုသာ ပွောဆိုမိတျဆကျပေးထား၏။
အပွနျတှငျ အိမျကိုတနျးမပွနျဘဲ မုတ်တမက တညျးခိုခနျးတဈခုမှာ နှဈညတိတိ အတူတကှ ဝငျရောကျတညျးခို နထေိုငျခဲ့သေးသညျ။ မုတ်တမမွို့မှာ အရငျမှောငျခိုခတျေတုနျးကလောကျ စညျကားခွငျးမရှိတော့ပမေယျ့ သူ့နညျးနှငျ့သူတော့ အသှားအလာမပကျြ နခေငျြ့စဖှယျရှိသော မျောလမွိုငျတဈဖကျကမျးမှ မွို့ငယျကလေးတဈမွို့ပငျဖွဈသညျ။ တညျးခိုခနျးမှာ သာမနျသုံးထပျသားကာရံထားသော အခနျးမြှသာဖွဈကွရာ တဈခနျးကအသံကို အခွားအခနျးက အတိုငျးသားပငျကွားနရေသညျ။ သူတို့တညျးခိုရာအခနျးနှငျ့ကပျလကျြ နဘေးအခနျးတှမှောလညျး အတှဲကိုယျစီ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျနှငျ့ နရေ့ောညပါ အလုပျဖွဈနကွေဟနျ တူပါသညျ။
ထူးကြျောက တညျးခိုခနျးမှာ ခှငျလာရှာသညျ့ မိနျးမငယျလေးတှထေဲက သူမကျြစိတှသေ့ညျ့ တဈယောကျကို ချေါယူလိုကျပွီး သုံးယောကျသား အိပျခနျးထဲမှာ စကားပွောဆို ဈေးညှိနကွေသညျ။ နောကျဆုံး ငှသေုံးသောငျးနှငျ့တဈညအတူနဖေို့ ဈေးတညျ့သှားပွီး နီနီမွငျ့က သူမနာမညျနှငျ့အသကျကိုမေးရာ အမညျရငျးက သဲနုဝါ …အမြားက သဲသဲဟုချေါကွပွီး အသကျ၂၀ နှဈရှိပွီဖွဈကွောငျး အမြိုးသမီးကလေးက ပွောပွပါသညျ။ မိသားစုအဆငျမပွဖွေဈရာက သူငယျခငျြးတဈယောကျ၏အကွံပေးခကျြအရ ယခုလို လာရောကျလုပျကိုငျရခွငျးဖွဈကွောငျး သူမ ဒီဘဝရောကျတာ ရကျ၂၀ ခနျ့သာ ရှိသေးကွောငျး သူမပွောစကားမြားအရ သိလိုကျရပါသညျ။
ကောငျမလေးမှာ အသားအရဖွေူဝငျးပွီး ရုပျရညျကလေး သနားကမား လုံးလုံးကဈကဈ တဈရဈပွပွေဈသော ငါးရံ့ကိုယျလုံးပိုငျရှငျကလေးဖွဈပွီး တကယျလညျး ခဈြစရာကောငျးလှပါပသေညျ။ “သဲသဲ မမနဲ့ရော အတူနနေိုငျတယျ မဟုတျလား ” သူမက မေးလိုကျရာ … “အဈမကွီး ကွိုကျသလိုသာ လုပျပါ သဲက အဆငျပွအေောငျနတေတျပါတယျ “ကဲ ထူးကြျောရေ စားသောကျစရာတှေ စီစဉျပါဦး ရော့ ဒီမှာ မငျးလိုအပျတာ ဝယျဖို့ ” ထူးကြျောလညျး နီနီမွငျ့ဆီက ငှကေိုလှမျးယူပွီး အပွငျထှကျသှားကာ သောကျစရာအရကျနှငျ့အမွညျးစုံ ညနစောစားသောကျရနျ ပငျလယျစာထမငျးပေါငျးနှငျ့ ခေါကျဆှဲကွျော ကွာဇံကွျောထုပျတှေ ပါဆယျဆှဲလာခဲ့သညျ။ သူအခနျးထဲကိုပွနျရောကျလာတော့ ဘယျလိုမှ ထငျမှတျမထားသော မွငျကှငျးတဈရပျက ဆီးကွိုနလေပွေီ။
ဒျေါနီနီမွငျ့နှငျ့သဲသဲတို့ ကုတငျပျေါမှာ ဝတျလဈစားလဈအနအေထားအတိုငျး တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ လူးလှိမျ့ပှဖေ့ကျ ပှတျသပျနလြှေကျရှိကွသညျ။ နှဈယောကျသား သူထှကျသှားပွီးကတညျးက ဇာတျလမျးစနကွေတာမို့ အရှိနျကလေးနညျးနညျးတော့ ရနပွေီလို့ ဆိုရလိမျ့မညျ။ နှုတျခမျးခငျြးဖိကပျနမျးစုပျကွ ဖငျကိုငျ နို့ကိုငျကာ ပှတျသီးပှတျသပျပွုကွရငျး ဒျေါနီနီမွငျ့၏လကျတဈဖကျက သဲသဲရဲ့ပေါငျခှဆုံကွားထဲက စောကျပတျရှိရာဆီကို တိုးဝငျသှားပွီး အပီအပွငျနှိုကျကိုငျနတောကို တှလေို့ကျရပသေညျ။ သဲသဲဆိုသော ကောငျမလေး ကုတငျပျေါမှာ ကော့ပြံနရှောသညျ။
ဒျေါနီနီမွငျ့က သူမကိုယျကို ဒူးထောငျပေါငျကား လှဲအိပျခိုငျးလိုကျပွီး ပေါငျနှဈဖကျကွားထဲတိုးဝငျ၍ ကောငျမလေး၏စောကျပတျရှိရာကို မကျြနှာအပျကာ စောကျပတျကို အားပါးတရ ကုနျးစုပျကုနျးယကျပဈလိုကျတာကို တှရေ့လသေညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့ ထနျနသေညျ။ သူမထနျနသေလောကျ သဲသဲလညျး မလူးသာမလှနျ့သာ အသညျးအသနျ ခံစားနရေရှာလသေညျ။ ကောငျမလေးရဲ့စောကျပတျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ခပျဟဟကလေး ဆှဲဖွဲရငျး စောကျခေါငျးကလေးထဲကို နီနီမွငျ့လြှာသှငျးကာ ထိုးသှငျးထိုးထုတျလုပျပေးနသေညျ။ စောကျစိကလေးကို နာနာစုပျ၍ လြှာနှငျ့ခလုတျတိုကျ လှုပျဆှကစားပေးသညျ။ သဲသဲတဈယောကျ မဟနျနိုငျတော့ပေ။
သူမစောကျပတျတဈခုလုံးကို အညှာကောငျးကောငျးကိုငျကာ ရစရာမရှိအောငျ အဆကျမပွတျ နှူးလိုကျဆှလိုကျ လုပျပေးနသေော ဒျေါနီနီမွငျ့ခေါငျးကို လကျနှငျ့ဖိညှပျဆှဲထားမိရာက တငျးပါးအိအိနှဈဖကျကို ကွှကာကွှကာနှငျ့ စောကျပတျကို အားမလိုအားမရကော့ထိုးပေးနမေိတော့သညျ။ “အ အား မမ မရ မရတော့ဘူး သဲ ဟို ဟာ ထှကျ ထှကျခငျြလာပွီ စုပျစုပျ အား အ အ ” “ရှလှတျ ဖလူး ဖလူး ပွှတျ ပွှတျ ” ဒျေါနီနီမွငျ့စုပျသညျ။ စောကျခေါငျးအဝကို ပါးစပျနှငျ့တပွေီ့း သဲသဲစောကျခေါငျးထဲက ပနျးထုတျလိုကျသော အရညျတှကေို ကုနျစငျသှားအောငျ တပွှတျပွှတျစုပျယူမြိုခပြဈလိုကျသညျ။ သဲသဲလညျး အားနာလိုကျတာ မပွောပါနှငျ့တော့။
“မမ ကွီး ကြှနျ ကြှနျမကို စိတျ မဆိုးပါနဲ့နျော ” “ဟဲ့ ဆိုးစရာလားလို့ မိနျးမယောကျြား ပွီးရငျ စောကျရညျလရညျထှကျကွတာခညျြးပဲ နငျပွီးရငျငါ့အလှညျ့ပေါ့ သဲသဲရဲ့ ဟငျးဟငျး ဟငျး ” “မမကို သဲ ပွနျမှုတျပေးမယျ ” ကောငျမလေးပွောပွီး ဒျေါနီနီမွငျ့နှုတျခမျးအစုံကို သူမနှုတျခမျးမြားဖွငျ့ ဖိကပျနမျးစုပျပဈလိုကျလသေညျ။ တဈယောကျကိုတဈယောကျနို့နယျသညျ ကိုငျသညျ ဖဈြသညျ ညှဈသညျ။ ဒျေါနီနီမွငျ့၏စောကျပတျကို ကောငျမလေးမကျြနှာအပျကာ ဒူထောကျကုနျးမှုတျလိုကျခြိနျမှာ ထူးကြျော ကုနျးထောငျပေးထားသော ကောငျမလေးဖငျသားအိအိကာကားကွီးနှဈဖကျကို အားရပါးရ ရှုစားခှငျ့ရလိုကျလတေော့သညျ။
ဖငျသားနှဈဖကျအကွားမှ သူမစောကျပတျကလေးကတော့ ပွူပွူတဈတဈကလေးဖွဈကာ အရညျအရှဲသားဖွငျ့ အဆီတဝငျးဝငျး မုနျ့ဆီကွျောကှငျးကဲ့သို့ပငျ ဖွဈနလေသေညျ။ သူမစောကျပတျကိုငေးကွညျ့ရငျး လီးတောငျခငျြလာ၍ စိတျကိုအတငျးခြိုးနှိမျထားလိုကျရသညျ။ ထူးကြျောလကျထဲမှ အရကျပုလငျးနှငျ့စားစရာပါဆယျထုပျတှကေို စားပှဲပျေါတငျလိုကျရငျး သူ့ပုဆိုးကိုပါ တဈလကျစတညျး ဖွခြှေတျခလြိုကျပါသညျ။ လီးတနျးလနျးနှငျ့ပငျ ကောငျမလေးအနားကို တိုးကပျလာခဲ့ပါသညျ။ သဲသဲကလညျး ထူးကြျောရောကျလာတာကို သိနပွေီးဖွဈရာ ထူးကြျောအနားကပျလာတာနှငျ့ သူမဖငျနှဈဖကျကို ခပျကော့ကော့ကွှကွှကလေး ကော့ထောငျပေးလြှကျ ထူးကြျောမကျြစိပသာဒရှိအောငျ အနအေထားကို အသငျ့ပွငျပေးလိုကျသညျ။
ဖငျသားအိအိကွားကပွူးပွဲထှကျပျေါနသေော သူမစောကျပတျမှာ လိုးဆောငျ့ဖို့ရနျ အသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုတာ ထူးကြျောသိလိုကျရသညျ။ ထူးကြျောကလညျး တောငျမတျစပွုနပွေီဖွဈသော သူ့လီးဒဈထိပျကို သဲသဲဆိုသညျ့ကောငျမလေး၏စောကျပတျအဝမှာတပေ့ေးလိုကျသညျ။ အရညျတှေ အိုငျထှနျးနသေညျ့ အပေါကျဝကလေးကို လီးထိပျဖွငျ့တဈခကျြနှဈခကျြထိုးမှပေဈလိုကျရငျး သူ့လီးကွီးကို သူမစောကျပတျကလေးထဲ ဖိနှိမျကာထညျ့သှငျးပဈလိုကျလသေညျ။ “စှတျ ဖှတျ စှပျ ” ဆိုသောအသံနှငျ့အတူ တဈကွပျ၍နသေောသူ့လီးခြောငျးတုတျတုတျကွီးက ကောငျမလေးကိုယျထဲကို တဈဝကျလောကျနဈမွုပျဆောငျ့ဝငျသှားသညျ။ အရှညျ ၈ လကျမလောကျရှိသောလီးကို အဆုံးဝငျဖို့ သူအတျောကလေး ကွိုးစားလိုကျရသညျ။ ထူးကြျော သဲသဲ၏ဖငျသားအိအိနှဈဖကျကို သူ့လကျနှဈဖကျဖွငျ့ အားပါးတရဆုပျကိုငျဆှဲယူပွီး သူမအနောကျကနေ ခါးကိုရှတေို့းနောကျငငျပွု၍ ကော့ကာကော့ကာ ဆောငျ့ညှောငျ့လိုးပေးနသေညျ။ သဲသဲကလညျး ကွီးမားလှသော ထူးကြျောလီးငပဲကွီး သူမစောကျပတျထဲခြောခြောမှမှေ့ဝေ့ငျနိုငျရနျအတှကျ ဖငျကို ဖငျဘူးတောငျးထောငျမတတျကုနျးပေးထားရငျး အံတကွိတျကွိတျနှငျ့လီးအရသာခံစားကာ အလိုးခံ၍ နပေသေညျ။
နီနီမွငျ့၏စောကျပတျကို တဈခကျြတဈခကျြကုနျးမှုတျလိုကျ သူမစောကျပတျထဲ တိုးဝငျတိုးထှကျ ပွုနသေော ထူးကြျောလီးကို ကုနျးခံလိုကျနှငျ့သဲသဲခမြာလညျး တဈယောကျတညျး မအားလပျနိုငျအောငျဘဲ ရှိနလေသေညျ။ “အား သဲသဲ သဲသဲ မမကို ယကျ ယကျစမျးကှာ အ အား ကောငျးလိုကျတာကလေးရယျ မမစောကျပတျ တအား ရှနပွေီ အစိကလစေုပျပွီး လကျနဲ့နာနာလေး လိုးပေးစမျးပါ သဲသဲရဲ့ ” “ဟုတျ ဟုတျ မမ … သဲ လိုး လိုး ပေးမယျ အ အိ အ အငျ့အငျ့ ဟငျ့ ကြှတျကြှတျ ” သဲသဲ ထူးကြျောလီးကိုကုနျးခံနရောက နီနီမွငျ့၏စောကျပတျကိုလြှာနှငျ့ယကျလိုကျ အစိကလေးကိုစုပျလိုကျ လုပျပွီး သူမစောကျခေါငျးဟဟပွဲပွဲကလေးထဲကို လကျညှိုးလကျခလယျနှဈခြောငျးပူး၍ ထိုးထညျ့လိုကျကာ အသှငျးအထုတျလုပျ၍ အဆကျမပွတျ ထိုးနှိုကျဆောငျ့လိုးပေးလိုကျသညျ။ နီနီမွငျ့လညျးဖီလငျတှေ တရိပျရိပျတကျကာ အပွတျကိုဟော့၍နပေပွေီ။ ထူးကြျောလညျး သဲသဲကိုလိုးရတာ အားမလိုအားမရဖွဈလာပွီး အားပါပါကွီး တဖွောငျးဖွောငျးတဖှပျဖှပျ လိုဏျသံထှကျအောငျ စိတျရှိလကျရှိကြုံးဆောငျ့၍ သူ့နှုတျမှလညျး နှဈကိုယျကွားသာရုံလသေံဖွငျ့ … “သဲ သဲ ကောငျးလား ကိုယျလိုးတာ ကွိုကျလား ”။
“ကောငျး ကောငျးတယျအဈကို အဈကို့ လီး အရမျးကွီးတယျ သဲစောကျပတျတောငျကှဲပွီလားမသိဘူး ဆောငျ့ဆောငျ့ပါ စိတျကွိုကျလုပျပါ အဈကို ” “အေး ဖငျကို ထပျကုနျးပေးစမျးကှာ နငျ့ စောကျပတျကလေးအနောကျကို ပွူးပွီးနတော လိုးလို့ အရမျးကောငျးတယျ ညီမရယျ ညီမဟာလေး စီးပွီးကွပျနတောပဲ ကဲ ကဲ လိုးပွီ လိုးပွီကှာ ” “စှတျ ဖှပျ ဘှတျ … ဗွိ ပွှတျ ဗှပျ … ဗလပျ လပျ ဘုတျ …ဖတျ … စှိ ဇှပျ ဖှတျ ဗှပျ ” “အ အမေ့ အိ အငျ့ဟငျ့ ဟငျ့ အဈကိုရယျ အား အ သပေါပွီ အသလေိုးတာပဲ ဟငျ့ဟငျ့ အ ကောငျး ကောငျးတယျ အဈကို ထပျမလိုးနဲ့ဦး ဒီအတိုငျး စိမျထားပေး ဟငျ့ ဟငျ့ ” “နဦေး လရညျထှကျတော့မယျကှ ဒီတဈခြီ လိုးပွီးမှ စိမျထားပေးမယျ နငျ့စောကျပတျက လိုးလို့ကို မဝဘူး နူးညံ့ပွီး အိကနဲအိကနဲ အီဆိမျ့နတောပဲ ကဲဟာ ကဲ ကဲ …မငျး ရ ရဲ့လား ” “ရတယျအဈကို ဆောငျ့ တအားဆောငျ့လိုးပေး အဈကို ကွမျးခငျြသလိုကွမျး အသသောလိုးပဈလိုကျတော့ အငျ့ အိ အ အ အလာ့” သူတို့ သုံးယောကျထံမှ အသံဗလံတှကေ အိပျခနျးထဲမှာ ဆူညံပှကျလောရိုကျ၍ သှားရလတေော့သညျ …. ပွီးပါပွီ။
တစ်နာရီနီးပါးလောက်လိုးပြီး နှစ်ယောက်သား လရည်နှင့်စောက်ရည်များ ပြိုင်တူပန်းထွက်ကာ ကိစ္စပြီးလိုက်ကြရသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့် ဒီတစ်ကြိမ်တွင်လည်း နှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးလိုက်ရခြင်းဖြစ်၍ အားတော်တော်ပျော့သွားကာ ထူးကျော်ရင်ခွင်ထဲ အသာဝင်ရောက်ကာမှိန်းနေလိုက်ရလေသည်။ “ထူးကျော်ရယ် မမ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ကုန်သလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူးကွယ် အပျော်ကနေအပျက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ ထင်ပါတယ် ” သူမက နောင်တရသလို ပြောလိုက်မိသည်။ ထူးကျော်က သူမပါးပြင်ကလေး အသာအယာနမ်းပြီး ချော့မော့နေရလေသည်။
ဒေါ်နီနီမြင့် သူမအကြောင်းတွေ ထူးကျော်ကို ပြန်လှန်ပြောပြသည်။ သူမအသက် ၁၉ နှစ်သမီးလောက်မှာ လင်နောက်လိုက်ပြေးသည့်အကြောင်းတွေ သမီးနှစ်ယောက်ရှေ့နောက်ဆင့်မွေးပြီး သမီးကြီး ၈ နှစ်သမီးလောက်တွင် ယောက်ျားဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောလိုက်ရင်း အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ကာ ဆုံးပါးသွားပုံတွေ သူမတို့နှစ်ဖက်မိဘတွေက လူချမ်းသာတွေဖြစ်ကြ၍ ဘဝကိုအပူအပင်မရှိဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းဝယ်ယူပြီး နေထိုင်ခဲ့ကာ လင်သည်ဖြစ်သူသေဆုံးချိန်ကျမှ သမီးနှစ်ယောက်နှင့် ကသီလင်တဖြစ်ခဲ့ရ၍ နယ်ရှိမိဘတွေပြန်လည်ပြောင်းရွေ့လာခဲ့ရကြောင်း။
တိုက်ခန်းကိုလည်း ပြန်လည်ရောင်းချပြီး မိဘတွေနှင့်အတူ ဒိုးတူပေါင်ဖက် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေလာခဲ့ကြောင်းများ ပြောပြပါသည်။သမီးတွေအရွယ်ရောက်၍ သမီးကြီးသန္တာက အသက် ၂၁ နှစ် အငယ်မနီလာက ၁၈နှစ်သမီး အရွယ်လောက်မှာ အိမ်ထောင်အသီးသီးကျကာ တစ်ယောက်က မြိတ်ထားဝယ် အငယ်မက တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း ထူးကျော်အကြောင်းစုံသိလိုက်ရသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်က ယခုအချိန်မှာ မိဘတွေလည်းမရှိရှာတော့ဘဲ မောင်နှမသားချင်းတွေ တကွဲတပြားဖြစ်ကာ စုဆောင်းထားသမျှ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို တတိတိထိုင်စားရင်းက တဖြည်းဖြည်းနှင့်လုံးပါးပါးကာ အထည်ကြီးပျက်ဘဝကို ရောက်ရှိနေလေပြီ။
သမီးနှစ်ယောက်ဆီက လစဉ်ပုံမှန်ပေးပို့လာသော ငွေကြေးများကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်သုံးစွဲပြီး ဘဝကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့်ဖြတ်သန်းနေရလေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ သူမဘဝမှာ သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အဝေးမှာနေရပြီး တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်လှသည်ဟု ဆိုရချေမည်။ နှစ်ဦးစလုံး ကိုယ်လိုတာကိုယ်ရကြပြီမို့ အတွေးကိုယ်စီနှင့်ငြိမ်နေကြပြီးနောက် ဒေါ်နီနီမြင့်က … “မောင်လေး မမတို့ တစ်နေ့လုံး ဒီလိုနေကြဖို့ မသင့်ဘူးထင်တယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြည့်ရဦးမယ် မင်းဖက်က ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် ညဖက်ကျမှ မမအိမ်နောက်ကနေ ပတ်ပြီးလာခဲ့လိုက်ပါ မမအိမ်တံခါး ဖွင့်ပေးထားမယ် ” “ကောင်းပါပြီ မမ မမလည်း ကျွန်တော့်ကြောင့် မောလှရောပေါ့ ကျွန်တော်တော့ ဒီလို မမျှော်လင့်ဘဲ မမနဲ့ အဆုံးစွန်ထိ ချစ်ခွင့်ရတာကို ကျေနပ်မဆုံးပါဘူး ” ။
“အပြောမကြီးနဲ့ ငါ့မောင်ရယ် မင်းအသက် အငယ်လေးရှိပါသေးတယ် နောက်တော့မှသာ မမနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတာကို မင်း နောင်တရချင်ရနေလိမ့်မယ် ” ဒေါ်နီနီမြင့်က ခပ်ညည်းညည်းကလေးပြောလိုက်ရာ သူမပုံစံကလေးကိုကြည့်ပြီး ထူးကျော်လည်းစိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ … “မမ … ” ဆိုပြီး … “ကျွန်တော်မပြန်ခင် တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်ချစ်လိုက်ချင်သေးတယ် မမရယ် ခွင့်ပြုနိုင်မလား ဟင် ” “အို မင်း မကျေနပ်သေးဘူးလားကွယ် ဒီလောက်အထိတောင် လူကိုဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေအောင် ဆော်ချင်သလို ဆော်ပြီးပြီပဲ ဥစ္စာ ဟင်း ဟင်း ”
“မရဘူး မမနဲ့နေရတာ အားရတယ် လို့ မရှိဘူး မမရဲ့ ချစ်လိုက်တာ မမရယ် ” ထူးကျော် ပြောလည်းပြော နမ်းလည်းနမ်းလိုက်ရာ ဒေါ်နီနီမြင့် ပျော့ကျသွားရှာပါသည်။ သူမကိုယ်လုံးအိအိကြီးကို ပွေ့ချီပြီး ထူးကျော် အခန်းထဲမှာ နေရာချလိုက်သည်။ သူမကပက်လက် သူက အပေါ်စီးက မှောက်ရက်သား နေရာယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး လှေကြီးထိုးကြိုက်နှစ်သက်သူချည်းမို့ ထင်ထားတာထက် အပေးအယူမျှနေခဲ့ကြပေသည်။ ထူးကျော် သူ့လီးကို နှဲ့ကာနှဲ့ကာဖြင့် တစ်ချက်ချင်းပင် ဖိလှိမ့်ကြိတ်၍ လိုးပေးနေသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်လည်း အောက်ကနေ သူမဖင်ကြီးနှစ်ဖက်ကို မြောက်ကာကြွကာဖြင့် ပင့်မြှောက်ခံဆောင်ကာ ညှောင့်ပေးနေလေသည်။
လီးဝင်လီးထွက် တဖြည်းဖြည်း ချောမွေ့လာပြီဖြစ်၍ တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ပိုမိုပြီး ကာမစည်းစိမ် တွေ့လာခဲ့ကြကာ လူချင်းမခွာနိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်နေရလေသည်။ တစ်ချီထပ်လိုးမည်ဟု မှန်းထားသော်လည်း နောက်ထပ် သုံးချီတိုင်တိုင် လိုးဖြစ်သွားသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့် စောက်ပတ်တွေ ပူထူကျိန်းစပ်ပြီး ထူးကျော်လည်း လရည်ခမ်းမတတ်ပင် ဖြစ်သွားရလေသည်။ “ထူးကျော် ခုလောလောဆယ် မပြန်ပါနဲ့ဦး မောင်လေးရာ မထူးပါဘူး မမတစ်ကိုယ်လုံးကိုလည်းယူ မမပေးတဲ့ပိုက်ဆံကိုလည်း အမှတ်တရအနေနဲ့ မင်းယူထားရမယ်နော် ကြားလား မောင်လေး … ဒီနေ့ မင်းအလုပ်မဆင်းချင်လည်း မဆင်းနဲ့တော့ မမတစ်ယောက်လုံး မင်းနဘေးမှာရှိပါတယ် ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှ မမ ပေးမယ် မမဘဝကို မင်းလက်ထဲမှာပဲ ပုံအပ်လိုက်ချင်ပြီကွယ် ” “မမသဘောအတိုင်းပါ မမ ” ထူးကျော် ပြောလိုက်ရင်း … “နောက်တစ်နာရီလောက် နေပြီးမှ ပြန်မှာပါ ကျွန်တော် ဒီည ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ် မမဖက်က စောင့်နေမှာသေချာပါတယ်နော် ” “စောင့်မှာပါ မောင်လေး မမ ကတိပေးပြီးသားပါပဲ ” မောမောနှင့် အတူလဲလျှောင်းအိပ်စက်၍ စကားတွတ်ထိုးပြောဆိုနေကြရင်း အချိန်ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားသည်။
ထူးကျော်လည်း သူ့မမဒေါ်နီနီမြင့်ကို နွုတ်ဆက်ပြီး လမ်းပေါ်ပြန်ထွက်လာခဲ့လေသည်။ တစ်နေကုန် ဟိုင်းဝေးခရီးနှင်ပြီး ခါတိုင်းထက်လည်း နေ့တွက်ပိုကိုက်ကာ ဒေါ်နီနီမြင့် မေတ္တာဖြင့်ပေးအပ်ခဲ့သော ငွေကြေးများကလည်း ရှိနေပြန်သဖြင့် ထူးကျော် အိမ်ကိုမပြန်တော့ဘဲ အမေ့ကို ခရီးဝေးသွားဖို့ရှိသေးကြောင်း လူကြုံနှင့် သတင်းစကားပါးလိုက်ပြီး စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်၍ အရက်နှင့်မြည်းစရာများ မှာယူကာ စားသောက် အချိန်ဖြုန်းလိုက်လေသည်။
ည ၉ နာရီလောက်ကျမှ ဆိုင်က ပြန်ထွက်လာသည်။ လူကလည်း ရေချိန်ကိုက်နေပြီမို့ ဒီအချိန်လောက်ဆို အချိန်ကောင်းပင် ဖြစ်ရော့မည်ဟု တွေးပြီး တစ်ယောက်တည်း စိတ်လွုပ်ရှားနေမိပေသည်။ လမ်းထိပ်ရှိ ဆေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သူအမြဲသုံးစွဲနေကျ ကာမနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆေးတစ်မျိုးကို ဝယ်ယူလိုက်ပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်အိမ်ရှိရာဖက်ကို လှည့်ဝင်လာခဲ့လိုက် ပါသည်။ အိမ်နောက်ဖေးဖက်ကလာပါ ဟု ကြိုပြောထားသည့်အတိုင်း ထူးကျော် ဆိုင်ကယ်စက်အရှိန်ကိုလျှော့ကာ slow လေး မောင်းနှင်လာခဲ့သည်။အိမ်နှင့်ကပ်ရက် တံစက်မြိတ်အောက်မှာဆိုင်ကယ် ဇက်သော့ခတ်ကာ ပစ်ထားလိုက်ပြီး နောက်ဖေးတံခါးကို အသာတွန်းကြည့်လိုက်သည်။ တံခါးကို lock ချထားခြင်းမရှိဘဲ စေ့ရုံသာစေ့ထားသည်။
ဒေါ်နီနီမြင့်တစ်ယောက် သူ့အလာကိုမစောင့်နိုင်ဘဲ အိပ်များအိပ်နေပြီလားတော့ မသိပါ။ အိမ်ထဲကို အသာခြေဖွဝင်လာပြီး အိမ်အတွင်းခန်းဖင်ဆီ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ပါးလွာလွန်းသည့် ညဝတ်စုံပျော့ကလေးဝတ်ကာ ပက်လက်ကားယားလဲလျှောင်း၍ နေသော ဒေါ်နီနီမြင့်အား အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်။ “ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ” “မမ မမ ကျွန်တော်ပါ ” “လာပြီ …” ဆိုသောအသံနှင့်အတူ ဒေါ်နီနီမြင့် တံခါးလာဖွင့်ပေးသည်။ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေဟန်ရှိပေမယ့် သူလာတာတွေ့ရ၍ ရွင်ရွင်မြူးမြူးကလေးဖြစ်သွားဟန်တူပါသည်။
ကိုယ်ပေါ်ကအကျ င်္ီပါးကလေးကို ဆွဲဆန့်လိုက်ပြီး သူ့ဆီလက်နှစ်ဖက်ကမ်းပေးလိုက်ရာ ထူးကျော်လည်း သူမကိုယ်လုံးအိအိထွေးထွေးလေးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပင် ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပါသည်။ “ဟင်း သောက်ထားလိုက်တာ နံစော်နေတာပဲ ” “ရဲဆေးတင်ထားတာလေ မတော်တဆ ပြေးသင့်ပြေးရတာပေါ့ ” “မင်းကို ဘယ်သူကပြေးခိုင်း မှာလဲ လို့ ဒီကဖြင့် ညဥ့်ဦးပိုင်းကတည်းက လည်တဆန့်ဆန့်နဲ့ မျှော်လိုက်ရတာ ” “နည်းနည်း ထပ်သောက်လိုက်ချင်သေးတယ် မမရော သောက်ချင်လား ပြော” ထူးကျော်က သူဆိုင်ကနေ အသင့်ယူလာသော အရက်ပုလင်းကို ပြလိုက်ရာ ဒေါ်နီနီမြင့်က ခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီး … “မောင်လေး သောက်ချင်သောက်လေ မမက နည်းနည်းပါးပါးပေါ့ လာ အိမ်ရှေ့သွားရအောင် မမ စားစရာ အမြည်းစီစဉ်ပေးမယ် ”။
ဒေါ်နီနီမြင့်ပြောလိုက်ပြီး ထူးကျော်လက်ထဲက ပုလင်းကိုပါ ယူ၍ အခန်းပြင်ကိုထွက်လာလိုက်သည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်အနောက်ကနေ ထူးကျော်လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ သူ့မျက်လုံးများက ပါးလွာသော ညဝတ်အကျ င်္ီအောက်မှ နိမ့်တုန်မြင့်တုန် လွုပ်ခါယမ်းသွားသော ဒေါ်နှီနီမြင့်၏ ကြီးမားထည်ဝါ စွင့်ကားလှသော ဖင်သားအိအိကြီးများကို အရသာယူကာ ကြည့်ငေးရင်းဖြင့် သူ့ပေါင်ခွကြားမှ လီးငပဲကြီးက အိပ်ပျော်ရာကနေ ခေါင်းထောင်နိုးထကာ လီးတောင်ချင်ချင်ဖြစ်လာရပေသည်။ သူမက အိမ်နောက်ခန်းကိုဝင်ပြီး ညနေကတည်းက ထူးကျော်လာလျှင် အတူတကွ စားသောက်ရန်အတွက် ဆိုင်ကနေ အသင့်မှယူထားသော အစိမ်းကြော် ငါးရှဥ့်ချိုချဉ်နှင့် ဝက်သားကုန်းဘောင်ကြီးကြော် စသည့် အမြည်းများနှင့်အတူ အရက်ထည့်ရန် ငါးကြင်းဖန်ခွက်နှစ်ခွက် ရေသန့်ဘူးတို့ကိုပါ တစ်ပါတည်း ထုတ်ယူလာခဲ့လေသည်။ “မမ တကယ်ကို အလိုက်သိတာပဲကွာ ကျွန်တော်တော့ မမကိုတောင် အားနာလာပြီ ” “ကဲ သောက်စရာရှိတာသောက်ပါ မောင်လေး အားနာတယ် ဘာတယ်လုပ်မနေနဲ့ …တစ်နေ့ခင်းလုံးလည်း လူကို အားမနာစတမ်း လိုးပြီးပြီပဲ ဘာ ခုကျမှ … လူကိုများ အားနာသလေး နဲ့ … ဟွင်း ” သူမ၏မျက်စောင်းပစ်ထိုးခြင်းကို ထူးကျော် ဇက်ကလေးပု၍ ငြိမ်ခံလိုက်ရသည်။
“ကဲ မင်းပဲ စိတ်ကြိုက်ထည့်ပေတော့ မမက သိပ်တော့မလုပ်တတ်ဘူး ယောက်ျားတွေက ဒါမျိုးသောက်မှ အားရှိတယ်လို့ မမကြားဖူးပါတယ် …ဒီတော့ မင်း အားရှိအောင်လို့ … ဟင်း ဟင်းဟင်း ” “ဒါဖြင့် ညတိုင်း သောက်မယ်နော် မမ … ဟဲ ဟဲ ” “သဘော သဘော ကိုယ်တော့်သဘောပါ …တော် ရေ့ တော်သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျုပ်က အမြည်းပန်းကန် အဆင်သင့် ပြင်ထားပေးရမှာပေါ့ အဟင်း ဟင်း ဟင်း ” ဒေါ်နီနီမြင့်က ထူးကျော်ကို ခပ်ငေါ့ငေါ့ကလေးပြောလိုက်ပြီး သူထည့်ပေးသော အရက်ခွက်ကိုယူ၍ နှစ်ယောက်သား ချီးယား …လုပ်ကာ ဒေါ်နီနီမြင့် ဖြည်းဖြည်းချင်းမြုံ့၍ သောက်လိုက်သည်။ အမှန်တော့ သမီးနှစ်ယောက်မွေးပြီးသား မိခင်တစ်ယောက်အနေနှင့် မီးတွင်းမှာကတည်းက သူအရက်သောက်ဖူးခဲ့ပါသည်။ လင်ဖြစ်သူသည်လည်း သင်္ဘောသားအရက်သမားပဲဖြစ်၍ နှစ်ယောက်အတူ ဝိုင်းဖွဲ့သောက်ကြတာမျိုးလည်း ရှိသည်ပင်။ ယခုကျမှ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထူးကျော်လည်း ဇကမသေးသူမို့ အရင်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သောက်ရင်း စကားလည်းပြော အမြည်းလည်းစားနှင့် နီနီမြင့်ကို သူ့ပေါင်ပေါ်မှာ အထိုင်ခိုင်း၍ သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို ဟိုကိုင်ဒီနယ်ပြုကာ နေလေသည်။ အရက်ရှိန်တက်လာသလို အာလေးလျှာလေးဖြစ်လာသည်။
ထူးကျော်က သွေးအားကောင်း၍ ကာမရာဂလုပ်ဆောင်မွုကို အားပေးသော ငရှဥ့်ကြော်ကို အားပါးတရစားလိုက်ပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်နွုတ်ခမ်းများကို သူ့နွုတ်ခမ်းဖြင့် ဖိကပ်နမ်းစုပ်၍ နို့အုံအိအိနှစ်လုံးကို ဖျစ်ကိုင်ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်။ ညဝတ်အကျ င်္ီမလုံမလဲ ဖြစ်နေသော ဒေါ်နီနီမြင့်၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာ ဗလာဟင်းလင်းဖြစ်လျှက်ရှိလေပြီ။ သူမ၏ထွားထွားအိအိ တင်းရင်းမို့ကြွနေသော ရင်သားအစိုင်အခဲကြီးနှစ်မြွာက ထူးကျော်၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်းခပ်ရမ်းရမ်း ကိုင်တွယ်ဖျစ်ညှစ်မွုအောက်မှာ စိစိညက်ညက်ပင် ကြေမွတော့မတတ်ဖြစ်ကာ နေရတော့သည်။
နို့ကို တစ်လှည့်စီချေနယ်ပေးနေရင်းက ထူးကျော် သူမပေါင်ခွဆုံရှိစောက်ပတ်ကို လာရောက်နှိုက်ကိုင်လိုက်ပြန်သည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်လည်း တအိအိတအင့်အင့်ညည်းတွားရင်း သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ခပ်ပြဲပြဲကလေးလုပ်ကာ ထောင်ကားပေးလိုက်ရာ ပေါင်လယ်မရောက်တရောက်ခန့် ရှိသည့် ညဥ့်ဝတ်ရုံကလေးမှာ သူမခါးအထက်ဆီသို့ ရောက်အောင် လျှောကျသွားရတော့သည်။ သူမ၏အမွေးအမြင်နက်မှောင်ထူထပ်လှသည့်စောက်ပတ်ဖောင်းအိအိကြီးက ထူးကျော်မြင်ကွင်းထဲမှာ အဖုံးအကွယ်မဲ့စွာဖြင့် ဘွားကနဲ ပေါ်ထွက်လာရပေသည်။ “မထူးပါဘူး မမ ချွတ်ပေးပါ့မယ် မောင်လေးရယ် ” နီနီမြင့် သူမ ညဝတ် လေးကို ကိုယ်ပေါ်ကနေ လျှောချွတ်ချပစ်လိုက်ပါသည်။
လူလည်း မူးရိပ်ရိပ်ကလေး ဖြစ်ကာနေပြီး ရမ္မက်မကြွကြွအောင် အပြတ်နွူးဆွခံထားရ၍ သူမစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ဖြစ်ချင်လာမိသည်။ ဝတ်လစ်စားလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို လှည့်ပတ်ပြပြီး ထူးကျော် အရှေ့မှာ သူမဒူးထောက်၍ ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့ပုဆိုးအောက်ကလီးကြီးကို စတင်စုပ်ယက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထူးကျော်လဒစ်ကြီးမှာ သူမအာငွေ့ရသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လေယာဉ်ပစ်ဒုံးကျည်တစ်စင်း မိုးပေါ်ကိုမြှောက်ထောင်ထားသလို မားမားမတ်မတ်ကြီး တောင်မတ်ထကြွလို့ လာခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ “အား သိပ်ကောင်းတယ် မမရယ် မမလီးစုပ်တာတော်လိုက်တာနော် ကျွန်တော့် လီးတစ်ချောင်းလုံးကို စုပ်လိုက်တာများ …
လက်ဖျားတောင်ခါတယ် သိလား …ဟင်း ဟင်း … ဟင်း ” “အဲဒါ မင်းလေးကို ချစ်လို့ပေါ့ မောင်လေးရဲ့ မမ ဒီညတော့ မင်းလီးကြီးကို ဝအောင်စုပ်ပေးမယ် ပြီးရင် နေ့လည်ကလို လိုးကြရအောင် နော် မောင်လေး ” နီနီမြင့်က အားတက်သရော ပြောဆိုလိုက်သည်။ သူမမျက်နှာကလေးနီမြန်းနေပြီး အသံကလည်း စိတ်လွုပ်ရှားမွုကြောင့် တုန်ယင်နေသလိုထင်ရလေသည်။ နီနီမြင့် ထူးကျော်လီးကို ကုန်းစုပ်ကာ လီးဒစ်ထိပ်ကနေ လီးအရင်းထိ ရှေ့သွားနောက်ပြန် ဂွင်းတိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ လီးကြီးက အကြောအမြှောင်းမြှောင်းထပြီး တောင်မတ်တုန်ခါနေလျှက်ရှိလေပြီ။
ဒီအတိုင်းဆက်လုပ်လျှင် လရည်ထွက်ကုန်မှာစိုး၍ ထူးကျော်က … “မမ ဟိုဖက်လှည့်ပြီး ဖင်ကုန်းလိုက် ” ဆိုကာ သူမကိုဖင်ကုန်းခိုင်းရင်း ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်အနောက်ကနေ စောက်ပတ်ဟပြဲပြဲကလေးအား ကုန်းမွုတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ နီနီမြင့်စောက်ပတ်မှာလည်း အရည်တွေရွဲသထက်ရွဲလာနေပြီဖြစ်သည်။ ထူးကျော်၏ ဘာဂျာအစုပ်အမွုတ်ကလည်း ပက်စက်လွန်းလှသည်။ သူမစောက်ပတ်ကို ယက်လိုက်စုပ်လိုက် လက်ချောင်းများဖြင့် ထိုးနှိုက်ဆွ၍ ဖင်ပေါက်ကိုပါ မကျန်အောင် လျှာပြားကြီးနှင့်ယက်ယက်ပေးလိုက်ရာ နီနီမြင့် ထွန့်ထွန့်လူးနေရတော့သည်။
စောက်ပတ်တဝိုက်က အရည်တွေလည်း တောက်တောက်ယိုကာ စီးကျလာရပြီး ကြမ်းပြင်ထက်မှာ အကွက်လိုက်ကြီးဖြစ်လို့သွားရတော့သည်။ နှစ်ယောက်သား သောက်လက်စ အရက်ခွက်တန်းလန်းနှင့် ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ နီနီမြင့်ကား ရာဂအရှိန်အတက်ကြီးတက်ပြီး ထန်ချင်တိုင်းထန်နေလေပြီ။ “မောင် မောင်လေး တော် ပြီထင်တယ် လိုးတော့ လိုးပါတော့နော် … မမ မရတော့ဘူးကွယ် ” “ဖင်ကုန်း လိုးမှာနော် မမ ” “မင်း ကြိုက်ရင် ပြီးတာပဲ ငါ့မောင်ရယ် ဖင်တော့မလိုးလိုက်နဲ့ဦးနော် ” “မမ သဘောမကျရင် မလုပ်ပါဘူး “. ထူးကျော်ပြောပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲကို လဒစ်ထိပ်ခေါင်းအား ဖိနှိမ်၍ သွင်းကာ ဆောင့်လိုးချလိုက်ပါသည်။
“အိအင့်အင့် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ငါ့မောင်ရယ် မမဘယ်မှ ထွက်မပြေးပါဘူး ” “အချိန်မရှိဘူးမမရဲ့ မမကို တစ်ညလုံး ဝအောင်လိုးရဦးမှာ ” “ဟင့် ကဲလိုက်တာနော် သူတို့ယောက်ျားတွေများ ဒီအတိုင်းချည်းပဲ ” ထူးကျော်လည်း ဘာမျှပြန်ပြောမနေတော့ဘဲ လီးကြီးအရင်းထိသွင်းကာ အဆက်မပြတ်ဇယ်ဆက်သလို ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်လေသည်။ နီနီမြင့် ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားပါးတရဆုပ်ဆွဲ၍ လိုးပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် နီနီမြင့်ဖင်သားကြီးနှစ်ဖက်က တုန်ကနဲတုန်ကနဲဖြစ်လို့သွားရသည်။ ထူးကျော်လည်း ထန်နေပြီဖြစ်၍ သူ့မမကို နည်းနည်းကလေးမှသက်ညှာခြင်းမရှိတော့ဘဲ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် မီးကုန်ယမ်းကုန် ကြဲပစ်လိုက်လေတော့သည်။
သူ့လီးကြီးက နီနီမြင့်ဖင်သားနှစ်ဖက်အကြားကနေ သူမစောက်ခေါင်းလေးထဲကို အဆုံးအထိ တဗွပ်ဗွပ်တဇွပ်ဇွပ်နှင့် ထိုးဖောက်ဝင်သွားပေရာ သားအိမ်အထိပင်ရောက်ရှိသွားပြီး သူမရင်ခေါင်းထဲမှာ စူးကနဲအောင့်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရပေသည်။ နီနီမြင့်လည်း ထိချက်ပြင်းလွန်းလှသဖြင့် မျက်နှာကလေး ရွုံ့လိုက်မဲ့လိုက်နှင့် တအိအိညည်းတွားရင်း ကာမအဆိပ် တက်ပြီးရင်းတက်လာရလေသည်။ “မောင်လေး တအားမဆောင့်နဲ့ကွာ မင်းလိုးတာ ကြမ်းလွန်းတယ် မမသေချင်စော်နံလာပြီ ” “လိုးလို့ သေတာ မကြားဖူးပါဘူး မမရဲ့ မမ ကျွန်တော့်လီးကို မကြိုက်ဘူးလား ”။
“အိုး ကြိုက်လို့ ခံတာပေါ့မောင်လေးရယ် ဖြေးဖြေးချင်းပဲ လိုးဖို့ ပြောတာပါ မင်းလည်းမော မမလည်း ခံရတာမသက်သာလှဘူးကွယ့် ” “ရတယ် မမ အကြိုက် ဖြစ်စေရမယ် ” ထူးကျော် မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာအောင်လိုးရင်း နီနီမြင့်လည်း စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ထူပူလာသည့်အလျှောက် ခဏနားခိုင်းလိုက်ရပြီး ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလိုက်ကြကာ ပက်လက်ဒူးထောင်ပေါင်ကား အနေအထားအတိုင်း သူကအပေါ်စီးကနေ နီနီမြင့်စောက်ပတ်ထဲကို လီးသွင်း၍ ဆက်လက်လိုးကြပြန်သည်။ ထူးကျော်က သူမဖင်ကိုအောက်ကနေ ပင့်မကိုင်ကာ သူ့ခါးအားကိုသုံးပြီးလိုးနေမို့ အရသာလည်း တကယ်ရှိလွန်းလှပေသည်။
“ကောင်းလား ဟင် မမ ” “ကောင်းတယ် မောင်ရယ် မမစောက်ပတ်ကွဲပြဲသွားအောင် လိုးလိုက်စမ်းပါကွယ် အ အား အင့်အင့် ဆောင့်ဆောင့် အိ အင့် …ကျွတ် ကျွတ် ” “စွတ်ဖွတ် ဖွပ် စွိ စွပ် ဖွတ် ဗလွတ် ဖွပ် ဗွပ် ဘုတ် ဗလပ် ဘွပ် ” အသံတွေမြိုင်ဆိုင်လို့သွားသည်။ နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်အကြာမှာ ထူးကျော်လည်း အားသွန်လိုးရင်း သူ့လီးကြီးထိပ်မှ လရည်များကို နီနီမြင့်စောက်ပတ်ထဲသို့ ပန်းညှစ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ နီနီမြင့်လည်း အသည်းခိုက်အောင် အကောင်းကြီးကောင်းသွားရပြီး စောက်ရည်များကို ထူးကျော်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်း ပန်းလွတ် လိုက်ရပေသည်။
နှစ်ယောက်သား ငြိမ်ကျသွားကြကာ ကြမ်းပြင်ထက်မှာ မောမောနှင့် ခေတ္တနားနေ လိုက်ကြသည်။ ဒုတိယအချီပြန်မစခင် အရက်သောက်လိုက် စားစရာအမြည်းတွေကုန်အောင်စားလိုက်ကြကာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပွေ့လိုက်ဖက်လိုက်နှင့် ကလူကျီစယ် ပြောဆိုနေကြပေသည်။ အချိန်က ည ၁၀ နာရီ ၁၁ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိပေဦးမည်။ အရက်တစ်ပုလင်းလုံးကုန်အောင် အပြတ်ရှင်းလိုက်ပြီးမှ ထူးကျော်က … “မမ အခန်းထဲ သွားကြမလား ” “နေဦး မောင်လေး မမမောင်လေးရင်ခွင်ထဲမှာပဲ အကြာကြီး လှဲနေချင်သေးတယ် မမ ဗွီဒီယိုအခွေတွေ စုထားတာရှိတယ် မင်းနဲ့အတူ ကြည့်ချင်လို့ ” “ကောင်းသားပဲ မမရဲ့ အပြာကားဆို ကြည့်ချင်တယ် ” ဒေါ်နီနီမြင့်လည်း လှဲနေရာက အသာထပြီး တီဗွီစင်ရှိရာသို့သွားကာ သူမသိမ်းဆည်းထားသည့်ခွေများထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာ အောခွေသုံးလေးခွေကို ရွေးထုတ်ယူလိုက်သည်။ အောက်စက်ထဲကို အခွေတစ်ခွေထိုးထည့်လိုက်ကာ နှစ်ယောက်သားအတူ ထိုင်ကြည့်ကြသည်။ အမေရိကန်အောကားပဲဖြစ်သည်။ သူမက တဏှာကြီးသူပီပီ အခွေကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း အမေရိကန်အောကားမှ ကြိုက်သူဖြစ်မှန်း ထူးကျော်သိခွင့်ရလိုက်ပါသည်။ မင်းသမီး မင်းသားက တစ်လက်တည်း ဝမ်းဘိုင်ဝမ်းဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ အတွဲအချင်းချင်း နှစ်ပင်လိမ် သုံးပင်လိမ် လိုးကြတာကို ပီပီပြင်ပြင်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
နီနီမြင့်က တစ်ယောက်တည်းနေချိန်မှာ ဤနည်းနှင့်ပင် သူမစိတ်ကို အပန်းဖြေကာ သာယာမွုရှာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထူးကျော်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် ဖွင့်ဟပြောပြနေပါသည်။ “မမက အုပ်စုနဲ့ လိုးတာကို ကြိုက်လို့လား ” “အဟင်း ဟင်း ဒါက လက်တွေ့လုပ်ရတာမျိုးမှ မဟုတ်တာ စိတ်ကူးနဲ့ရူးကြတာပဲလေ လိန် ကိစ္စဆိုတာမျိုးက သဘာဝတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်လေလေ ဖီလင် ပိုရလေလေပဲ မဟုတ်လား ငါ့မောင်ရယ် ” “အင်း မမပြောတာလည်း မှန်သားပဲ ကျွန်တော်လည်း အခွင့်ကြုံရင် နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ လိုးချင်သားပဲ မမကရော ”
“မမလည်း မောင်လေးလိုပဲပေါ့ကွယ် လူတိုင်းဟာ အသွေးနဲ့အသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားကြတာပဲ မဟုတ်လားလို့ …ဒါပေမယ့် မဖြစ်သင့်လို့သာ ဆန္ဒကို ဦးနှောက်နဲ့ အသိဉာဏ်နဲ့ ထိန်းပြီးနေကြရတာပေါ့ ” “ကျွန်တော် မမကို ပိုချစ် ပိုလေးစားသွားပြီ မမရယ် ” “မမလည်း မောင်လေးကို ချစ်တယ် မောင်လေးလိုချင်ရင် မမ ဘာမဆိုပေးချင်တယ် ” “ကျွန်တော်က မမဖင်ကို လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရော …” “လုပ်လေ မမကို စောက်ပတ်နဲ့ ဖင် မောင်လေး လိုးချင်တာလိုးပါ ဒီတစ်ညတည်းမဟုတ်ဘူးနော် နောက်ရက်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ မင်းစိတ်သန်သလို လုပ် စိတ်ရှိလိုးနိုင်တယ် မမ ဒါ အပိုပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး နော် မောင်လေး ” ဒေါ်နီနီမြင့်တစ်ယောက် ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းပင် ပြောချလိုက်ပါသည်။
ဆက်လက်၍လည်း အကယ်၍များ ထူးကျော်အနေနှင့်နှစ်ယောက်လိုးချင်လျှင် ကြိုက်ရာ စော်တစ်ပွေကို သူမအိမ်သို့ ခေါ်လာနိုင်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါမိန်းမကသာ သဘောတူခွင့်ပြုမည်ဆိုပါက မိမိဖက်ကလည်း ဘာကိုမဆို လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း များကို ထူးကျော်အား ပွင့်လင်းစွာပင် ပြောဆိုလိုက်ပြန်ပါသည်။ သူမဟာ သဝန်တိုတတ်သူမဟုတ်ကြောင်းနှင့် အချစ်နှင့်ရမ္မက်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အသက်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထူးကျော်ကို ထပ်လောင်းရှင်းပြနေပြန်ပါသည်။ ဗွီဒီယိုအပြာခွေထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကြည့်ရင်း မောင်လေးနှင့်မမ ဆက်ပြီး အလုပ်ဖြစ်ကြသည်။
အခွေထဲမှာတော့ အရှေ့တိုင်းအနွယ်ဖြစ်သော မင်းသမီးနုနုထွတ်ထွတ်ကလေးကို ကပ္ပလီလူမည်း အမျိုးသားကြီးနှစ်ယောက်က အရှေ့ပေါက်အနောက်ပေါက် အကုန်ဖွင့်ပြီး ပက်စက်စွာပင် စခန်းသွား နေကြပေသည်။ ထူးကျော်လည်း အားကျမခံ အနောက်ပေါက်ဖွင့်ချင်လာ၍ နီနီမြင့်ကိုပြောလိုက်ရာ သူမကခွင့်ပြုတာနှင့် ထူးကျော်လည်း သူမဖင်ထဲ လီးထည့်ပြီး အပီအပြင်ကျုံးလိုးပစ်လိုက်လေသည်။ ဖင်လိုးရင်းကလည်း သူမစောက်ပတ်ကို လက်ထည့်နှိုက်ဆွ၍ အဆက်မပြတ်အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ရာ သူမစောက်ခေါင်းလေးထဲမှ စောက်ရည်တွေ တဒီးဒီးစီးကျလာပြီး ဖင်နှင့်စောက်ပတ် တစ်ပြိုင်တည်း အဆော်ခံရသလို ဖြစ်နေ၍ နီနီမြင့်လည်း အကောင်းပေါ်အကောင်းဆင့်ကာ သုံးလေးချီလောက် ဆက်တိုက်ပြီးသွားရတော့၏။
ဖင်တစ်ချီလိုးပြီး စောက်ပတ်ကိုတစ်ချီ ထပ်လိုးပေးလိုက်သည်။ နီနီမြင့်ကို မှောက်ခုံရက်ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ခွေးကုန်းလိုးခြင်းဖြစ်သည်။ နာရီဝက်လောက်လိုးပြီး နီနီမြင့်က ညောင်းသည်ဟုဆိုသဖြင့် ပက်လက်ပုံစံပြောင်းကာ ထူးကျော်က အပေါ်စီးကနေတက်ခွပြီး လိုးပေးသည်။ နီနီမြင့်လည်း သူ့ဆောင့်ချက်အတိုင်းလိုက်ပြီး အောက်ကနေ သူမဖင်သားအိအိကြီးနှစ်ဖက်ကို မြောက်ကာကြွကာဖြင့် ပင့်ညှောင့်လိုးပေးနေသည်။ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာတော့မှ နှစ်ယောက်သား စောက်ရည်နှင့်လရည်များ ပြိုင်တူပန်းထွက်ပြီး တစ်ချီပြီးသွားကြလေသည်။
တစ်ညလုံး အောကားတစ်ကားပြီးတစ်ကားကြည့်သလို နှစ်ယောက်သား ဘယ်နှစ်ချီဘယ်နှစ်လားမသိအောင် အပြတ်အသတ်ပင် လိုးကြဆော်ကြသည်။ အိပ်ယာဝင်ချိန်ကပင် မနက် ၅ နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီ။ နှစ်ယောက်စလုံး အရက်ကမူး အားအင်ကုန်ခမ်းနွမ်းလျပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်တွယ်၍ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျသွားကြလေ၏။ နောက်နှစ်ရက်အကြာ ဒေါ်နီနီမြင့် ဘီလင်းတောင်စွန်းဖက်အသွားတွင် ထူးကျော်ကိုသာ ဆိုင်ကယ်နှင့်ပို့ခိုင်းပြီး သမီငယ်ဖြစ်သူ၏ ယောက်ျားဖက်က အမျိုးအိမ်မှာ တစ်ညအိပ်နေထိုင်ခဲ့သည်။ နီနီမြင့်က ထူးကျော်ကို သူမ၏မောင်ဝမ်းကွဲဟုသာ ပြောဆိုမိတ်ဆက်ပေးထား၏။
အပြန်တွင် အိမ်ကိုတန်းမပြန်ဘဲ မုတ္တမက တည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ နှစ်ညတိတိ အတူတကွ ဝင်ရောက်တည်းခို နေထိုင်ခဲ့သေးသည်။ မုတ္တမမြို့မှာ အရင်မှောင်ခိုခေတ်တုန်းကလောက် စည်ကားခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် သူ့နည်းနှင့်သူတော့ အသွားအလာမပျက် နေချင့်စဖွယ်ရှိသော မော်လမြိုင်တစ်ဖက်ကမ်းမှ မြို့ငယ်ကလေးတစ်မြို့ပင်ဖြစ်သည်။ တည်းခိုခန်းမှာ သာမန်သုံးထပ်သားကာရံထားသော အခန်းမျှသာဖြစ်ကြရာ တစ်ခန်းကအသံကို အခြားအခန်းက အတိုင်းသားပင်ကြားနေရသည်။ သူတို့တည်းခိုရာအခန်းနှင့်ကပ်လျက် နဘေးအခန်းတွေမှာလည်း အတွဲကိုယ်စီ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် နေ့ရောညပါ အလုပ်ဖြစ်နေကြဟန် တူပါသည်။
ထူးကျော်က တည်းခိုခန်းမှာ ခွင်လာရှာသည့် မိန်းမငယ်လေးတွေထဲက သူမျက်စိတွေ့သည့် တစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူလိုက်ပြီး သုံးယောက်သား အိပ်ခန်းထဲမှာ စကားပြောဆို ဈေးညှိနေကြသည်။ နောက်ဆုံး ငွေသုံးသောင်းနှင့်တစ်ညအတူနေဖို့ ဈေးတည့်သွားပြီး နီနီမြင့်က သူမနာမည်နှင့်အသက်ကိုမေးရာ အမည်ရင်းက သဲနုဝါ …အများက သဲသဲဟုခေါ်ကြပြီး အသက်၂၀ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသမီးကလေးက ပြောပြပါသည်။ မိသားစုအဆင်မပြေဖြစ်ရာက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏အကြံပေးချက်အရ ယခုလို လာရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူမ ဒီဘဝရောက်တာ ရက်၂၀ ခန့်သာ ရှိသေးကြောင်း သူမပြောစကားများအရ သိလိုက်ရပါသည်။
ကောင်မလေးမှာ အသားအရေဖြူဝင်းပြီး ရုပ်ရည်ကလေး သနားကမား လုံးလုံးကစ်ကစ် တစ်ရစ်ပြေပြစ်သော ငါးရံ့ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်ကလေးဖြစ်ပြီး တကယ်လည်း ချစ်စရာကောင်းလှပါပေသည်။ “သဲသဲ မမနဲ့ရော အတူနေနိုင်တယ် မဟုတ်လား ” သူမက မေးလိုက်ရာ … “အစ်မကြီး ကြိုက်သလိုသာ လုပ်ပါ သဲက အဆင်ပြေအောင်နေတတ်ပါတယ် “ကဲ ထူးကျော်ရေ စားသောက်စရာတွေ စီစဉ်ပါဦး ရော့ ဒီမှာ မင်းလိုအပ်တာ ဝယ်ဖို့ ” ထူးကျော်လည်း နီနီမြင့်ဆီက ငွေကိုလှမ်းယူပြီး အပြင်ထွက်သွားကာ သောက်စရာအရက်နှင့်အမြည်းစုံ ညနေစာစားသောက်ရန် ပင်လယ်စာထမင်းပေါင်းနှင့် ခေါက်ဆွဲကြော် ကြာဇံကြော်ထုပ်တွေ ပါဆယ်ဆွဲလာခဲ့သည်။ သူအခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာတော့ ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားသော မြင်ကွင်းတစ်ရပ်က ဆီးကြိုနေလေပြီ။
ဒေါ်နီနီမြင့်နှင့်သဲသဲတို့ ကုတင်ပေါ်မှာ ဝတ်လစ်စားလစ်အနေအထားအတိုင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လူးလှိမ့်ပွေ့ဖက် ပွတ်သပ်နေလျှက်ရှိကြသည်။ နှစ်ယောက်သား သူထွက်သွားပြီးကတည်းက ဇာတ်လမ်းစနေကြတာမို့ အရှိန်ကလေးနည်းနည်းတော့ ရနေပြီလို့ ဆိုရလိမ့်မည်။ နွုတ်ခမ်းချင်းဖိကပ်နမ်းစုပ်ကြ ဖင်ကိုင် နို့ကိုင်ကာ ပွတ်သီးပွတ်သပ်ပြုကြရင်း ဒေါ်နီနီမြင့်၏လက်တစ်ဖက်က သဲသဲရဲ့ပေါင်ခွဆုံကြားထဲက စောက်ပတ်ရှိရာဆီကို တိုးဝင်သွားပြီး အပီအပြင်နှိုက်ကိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပေသည်။ သဲသဲဆိုသော ကောင်မလေး ကုတင်ပေါ်မှာ ကော့ပျံနေရှာသည်။
ဒေါ်နီနီမြင့်က သူမကိုယ်ကို ဒူးထောင်ပေါင်ကား လှဲအိပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားထဲတိုးဝင်၍ ကောင်မလေး၏စောက်ပတ်ရှိရာကို မျက်နှာအပ်ကာ စောက်ပတ်ကို အားပါးတရ ကုန်းစုပ်ကုန်းယက်ပစ်လိုက်တာကို တွေ့ရလေသည်။ ဒေါ်နီနီမြင့် ထန်နေသည်။ သူမထန်နေသလောက် သဲသဲလည်း မလူးသာမလွန့်သာ အသည်းအသန် ခံစားနေရရှာလေသည်။ ကောင်မလေးရဲ့စောက်ပတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခပ်ဟဟကလေး ဆွဲဖြဲရင်း စောက်ခေါင်းကလေးထဲကို နီနီမြင့်လျှာသွင်းကာ ထိုးသွင်းထိုးထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။ စောက်စိကလေးကို နာနာစုပ်၍ လျှာနှင့်ခလုတ်တိုက် လွုပ်ဆွကစားပေးသည်။ သဲသဲတစ်ယောက် မဟန်နိုင်တော့ပေ။
သူမစောက်ပတ်တစ်ခုလုံးကို အညှာကောင်းကောင်းကိုင်ကာ ရစရာမရှိအောင် အဆက်မပြတ် နွူးလိုက်ဆွလိုက် လုပ်ပေးနေသော ဒေါ်နီနီမြင့်ခေါင်းကို လက်နှင့်ဖိညှပ်ဆွဲထားမိရာက တင်းပါးအိအိနှစ်ဖက်ကို ကြွကာကြွကာနှင့် စောက်ပတ်ကို အားမလိုအားမရကော့ထိုးပေးနေမိတော့သည်။ “အ အား မမ မရ မရတော့ဘူး သဲ ဟို ဟာ ထွက် ထွက်ချင်လာပြီ စုပ်စုပ် အား အ အ ” “ရှလွတ် ဖလူး ဖလူး ပြွတ် ပြွတ် ” ဒေါ်နီနီမြင့်စုပ်သည်။ စောက်ခေါင်းအဝကို ပါးစပ်နှင့်တေ့ပြီး သဲသဲစောက်ခေါင်းထဲက ပန်းထုတ်လိုက်သော အရည်တွေကို ကုန်စင်သွားအောင် တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ယူမျိုချပစ်လိုက်သည်။ သဲသဲလည်း အားနာလိုက်တာ မပြောပါနှင့်တော့။
“မမ ကြီး ကျွန် ကျွန်မကို စိတ် မဆိုးပါနဲ့နော် ” “ဟဲ့ ဆိုးစရာလားလို့ မိန်းမယောက်ျား ပြီးရင် စောက်ရည်လရည်ထွက်ကြတာချည်းပဲ နင်ပြီးရင်ငါ့အလှည့်ပေါ့ သဲသဲရဲ့ ဟင်းဟင်း ဟင်း ” “မမကို သဲ ပြန်မွုတ်ပေးမယ် ” ကောင်မလေးပြောပြီး ဒေါ်နီနီမြင့်နွုတ်ခမ်းအစုံကို သူမနွုတ်ခမ်းများဖြင့် ဖိကပ်နမ်းစုပ်ပစ်လိုက်လေသည်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နို့နယ်သည် ကိုင်သည် ဖျစ်သည် ညှစ်သည်။ ဒေါ်နီနီမြင့်၏စောက်ပတ်ကို ကောင်မလေးမျက်နှာအပ်ကာ ဒူထောက်ကုန်းမွုတ်လိုက်ချိန်မှာ ထူးကျော် ကုန်းထောင်ပေးထားသော ကောင်မလေးဖင်သားအိအိကာကားကြီးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရ ရွုစားခွင့်ရလိုက်လေတော့သည်။
ဖင်သားနှစ်ဖက်အကြားမှ သူမစောက်ပတ်ကလေးကတော့ ပြူပြူတစ်တစ်ကလေးဖြစ်ကာ အရည်အရွဲသားဖြင့် အဆီတဝင်းဝင်း မုန့်ဆီကြော်ကွင်းကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေလေသည်။ သူမစောက်ပတ်ကိုငေးကြည့်ရင်း လီးတောင်ချင်လာ၍ စိတ်ကိုအတင်းချိုးနှိမ်ထားလိုက်ရသည်။ ထူးကျော်လက်ထဲမှ အရက်ပုလင်းနှင့်စားစရာပါဆယ်ထုပ်တွေကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ရင်း သူ့ပုဆိုးကိုပါ တစ်လက်စတည်း ဖြေချွတ်ချလိုက်ပါသည်။ လီးတန်းလန်းနှင့်ပင် ကောင်မလေးအနားကို တိုးကပ်လာခဲ့ပါသည်။ သဲသဲကလည်း ထူးကျော်ရောက်လာတာကို သိနေပြီးဖြစ်ရာ ထူးကျော်အနားကပ်လာတာနှင့် သူမဖင်နှစ်ဖက်ကို ခပ်ကော့ကော့ကြွကြွကလေး ကော့ထောင်ပေးလျှက် ထူးကျော်မျက်စိပသာဒရှိအောင် အနေအထားကို အသင့်ပြင်ပေးလိုက်သည်။
ဖင်သားအိအိကြားကပြူးပြဲထွက်ပေါ်နေသော သူမစောက်ပတ်မှာ လိုးဆောင့်ဖို့ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ထူးကျော်သိလိုက်ရသည်။ ထူးကျော်ကလည်း တောင်မတ်စပြုနေပြီဖြစ်သော သူ့လီးဒစ်ထိပ်ကို သဲသဲဆိုသည့်ကောင်မလေး၏စောက်ပတ်အဝမှာတေ့ပေးလိုက်သည်။ အရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေသည့် အပေါက်ဝကလေးကို လီးထိပ်ဖြင့်တစ်ချက်နှစ်ချက်ထိုးမွေပစ်လိုက်ရင်း သူ့လီးကြီးကို သူမစောက်ပတ်ကလေးထဲ ဖိနှိမ်ကာထည့်သွင်းပစ်လိုက်လေသည်။ “စွတ် ဖွတ် စွပ် ” ဆိုသောအသံနှင့်အတူ တစ်ကြပ်၍နေသောသူ့လီးချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးက ကောင်မလေးကိုယ်ထဲကို တစ်ဝက်လောက်နစ်မြုပ်ဆောင့်ဝင်သွားသည်။ အရှည် ၈ လက်မလောက်ရှိသောလီးကို အဆုံးဝင်ဖို့ သူအတော်ကလေး ကြိုးစားလိုက်ရသည်။ ထူးကျော် သဲသဲ၏ဖင်သားအိအိနှစ်ဖက်ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားပါးတရဆုပ်ကိုင်ဆွဲယူပြီး သူမအနောက်ကနေ ခါးကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်ပြု၍ ကော့ကာကော့ကာ ဆောင့်ညှောင့်လိုးပေးနေသည်။ သဲသဲကလည်း ကြီးမားလှသော ထူးကျော်လီးငပဲကြီး သူမစောက်ပတ်ထဲချောချောမွေ့မွေ့ဝင်နိုင်ရန်အတွက် ဖင်ကို ဖင်ဘူးတောင်းထောင်မတတ်ကုန်းပေးထားရင်း အံတကြိတ်ကြိတ်နှင့်လီးအရသာခံစားကာ အလိုးခံ၍ နေပေသည်။
နီနီမြင့်၏စောက်ပတ်ကို တစ်ချက်တစ်ချက်ကုန်းမွုတ်လိုက် သူမစောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်တိုးထွက် ပြုနေသော ထူးကျော်လီးကို ကုန်းခံလိုက်နှင့်သဲသဲခမျာလည်း တစ်ယောက်တည်း မအားလပ်နိုင်အောင်ဘဲ ရှိနေလေသည်။ “အား သဲသဲ သဲသဲ မမကို ယက် ယက်စမ်းကွာ အ အား ကောင်းလိုက်တာကလေးရယ် မမစောက်ပတ် တအား ရွနေပြီ အစိကလေစုပ်ပြီး လက်နဲ့နာနာလေး လိုးပေးစမ်းပါ သဲသဲရဲ့ ” “ဟုတ် ဟုတ် မမ … သဲ လိုး လိုး ပေးမယ် အ အိ အ အင့်အင့် ဟင့် ကျွတ်ကျွတ် ” သဲသဲ ထူးကျော်လီးကိုကုန်းခံနေရာက နီနီမြင့်၏စောက်ပတ်ကိုလျှာနှင့်ယက်လိုက် အစိကလေးကိုစုပ်လိုက် လုပ်ပြီး သူမစောက်ခေါင်းဟဟပြဲပြဲကလေးထဲကို လက်ညှိုးလက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူး၍ ထိုးထည့်လိုက်ကာ အသွင်းအထုတ်လုပ်၍ အဆက်မပြတ် ထိုးနှိုက်ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။ နီနီမြင့်လည်းဖီလင်တွေ တရိပ်ရိပ်တက်ကာ အပြတ်ကိုဟော့၍နေပေပြီ။ ထူးကျော်လည်း သဲသဲကိုလိုးရတာ အားမလိုအားမရဖြစ်လာပြီး အားပါပါကြီး တဖြောင်းဖြောင်းတဖွပ်ဖွပ် လိုဏ်သံထွက်အောင် စိတ်ရှိလက်ရှိကျုံးဆောင့်၍ သူ့နွုတ်မှလည်း နှစ်ကိုယ်ကြားသာရုံလေသံဖြင့် … “သဲ သဲ ကောင်းလား ကိုယ်လိုးတာ ကြိုက်လား ”။
“ကောင်း ကောင်းတယ်အစ်ကို အစ်ကို့ လီး အရမ်းကြီးတယ် သဲစောက်ပတ်တောင်ကွဲပြီလားမသိဘူး ဆောင့်ဆောင့်ပါ စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ အစ်ကို ” “အေး ဖင်ကို ထပ်ကုန်းပေးစမ်းကွာ နင့် စောက်ပတ်ကလေးအနောက်ကို ပြူးပြီးနေတာ လိုးလို့ အရမ်းကောင်းတယ် ညီမရယ် ညီမဟာလေး စီးပြီးကြပ်နေတာပဲ ကဲ ကဲ လိုးပြီ လိုးပြီကွာ ” “စွတ် ဖွပ် ဘွတ် … ဗြိ ပြွတ် ဗွပ် … ဗလပ် လပ် ဘုတ် …ဖတ် … စွိ ဇွပ် ဖွတ် ဗွပ် ” “အ အမေ့ အိ အင့်ဟင့် ဟင့် အစ်ကိုရယ် အား အ သေပါပြီ အသေလိုးတာပဲ ဟင့်ဟင့် အ ကောင်း ကောင်းတယ် အစ်ကို ထပ်မလိုးနဲ့ဦး ဒီအတိုင်း စိမ်ထားပေး ဟင့် ဟင့် ” “နေဦး လရည်ထွက်တော့မယ်ကွ ဒီတစ်ချီ လိုးပြီးမှ စိမ်ထားပေးမယ် နင့်စောက်ပတ်က လိုးလို့ကို မဝဘူး နူးညံ့ပြီး အိကနဲအိကနဲ အီဆိမ့်နေတာပဲ ကဲဟာ ကဲ ကဲ …မင်း ရ ရဲ့လား ” “ရတယ်အစ်ကို ဆောင့် တအားဆောင့်လိုးပေး အစ်ကို ကြမ်းချင်သလိုကြမ်း အသေသာလိုးပစ်လိုက်တော့ အင့် အိ အ အ အလာ့” သူတို့ သုံးယောက်ထံမှ အသံဗလံတွေက အိပ်ခန်းထဲမှာ ဆူညံပွက်လောရိုက်၍ သွားရလေတော့သည် …. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ညီမလေးပွီးမကွီးအလညျ့